Dopamine သည်လူတို့၏အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်း (2015) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်သည်ချဉ်းကပ်မှုမှရှောင်ရှားခြင်းကိုစီမံသည်
Dopamine လူ့ Sensation-ရှာ (2015) တွင်ချဉ်းကပ်-ရှောင်ရှားထိန်းညှိ
int J ကို Neuropsychopharmacol ။ 2015 ဧပြီ 9။ pii: pyv041 ။ Doi: 10.1093 / ijnp / pyv041 ။
Norbury တစ်ဦးက1, Kurth-နယ်လ်ဆင် Z ကို2, Winston JS2, Roiser JP2, Husain M က2.
နောက်ခံသမိုင်း: Sensation-ရှာမြင့်မားတဲ့လူမှုရေးကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူ psychopathologies အမျိုးမျိုးများအတွက်အရေးပါသောအားနည်းချက်အချက်ပါဝငျတဲ့ရိုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်နည်းနည်းဖြစ်စေပြင်းထန်သောအာရုံခံအတွေ့အကြုံများသို့မဟုတ်လူသားတွေအတွက်သူတို့ရဲ့ neuropharmacological မော်ဂျူများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုအခြေခံသည့်ယန္တယားနှင့် ပတ်သက်. နားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။
နည်းလမ်းများ: ဤတွင်ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးလူသားအတွက်အာရုံခံစားမှု-ရှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တစ်ဝတ္ထုပါရာဒိုင်းအကဲဖြတ်ရန်။ ဤသည်ကိုစမ်းသပ်ရာပါဝင်သူတစ်ဦးရိုးရှင်းတဲ့စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်မှ orthogonal တစ်ခုပြင်းထန်သောထိတွေ့နိုင်သောလှုံ့ဆော်မှု (ပျော့လျှပ်စစ်ဆွ) ကိုရှောင်ကြဉ်သို့မဟုတ် Self-စီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်စေရွေးချယ်ဖို့အတိုင်းအတာ probes ။ Next ကိုကြှနျုပျတို့သညျဤအပြုအမူတစ်ခုအတွင်း-ဘာသာရပ်များ, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled, ကို double-မျက်စိကန်းသောဒီဇိုင်းကို အသုံးပြု. dopamine D2 receptors ၏ခြယ်လှယ်ဖို့အထိခိုက်မခံသည်ဖြစ်စေပါဝင်သူတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအစုံအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။
ရလဒ်များ: နှစ်ဦးစလုံးနမူနာများတွင်ပိုမိုမြင့်မား Self-အစီရင်ခံအာရုံ-ရှာကြံနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီလျှင်ပင်ငွေကြေးအမြတ်၏ဤပါဝင်ပတ်သက်ယဇ်ပျော့လျှပ်စစ်ဆွ-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှု၏ကြီးမြတ်သောအချိုးအစားကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။ ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောဤလှုံ့ဆော်မှုရွေးချယ်တဲ့အခါလူတွေတုံ့ပြန်မှု၏ပျော့လျှပ်စစ်ဆွ-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုပြအရှိန်တစ်ခုအပိုဆောင်းအပြုသဘောစီးပွားရေးတန်ဖိုးတာဝန်ပေးအပ်သူဆုံးဖြတ်သည်။ ဆနျ့ကငျြ, ပြသနေတဲ့အနုတ်လက္ခဏာတန်ဖိုးကိုတာဝန်ပေးအပ်သောသူတို့အားတုံ့ပြန်မှုနှေးကွေး။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် low-level, ချဉ်းကပ်-ရှောင်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေနဲ့ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ ထို့ပြင် D2 ရန် haloperidol ရွေးချယ်သာမန်အခြေအနေများ (အမူအကျင့်က high-အာရုံရှာဖွေနေသူ) အရဤအလှုံ့ဆော်မှုဖို့ချဉ်းကပ်မှုတုံ့ပြန်မှုပြခဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပျော့လျှပ်စစ်ဆွ-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုဖို့တာဝန်နောက်ထပ်စီးပွားရေးတန်ဖိုးယုတ်လျော့လေ၏။
ကောက်ချက်: ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်လူသားတွေအတွက် dopamine အားဖြင့် modulated တစ်ခုချဉ်းကပ်-ရှောင်ရှားခြင်းကဲ့သို့သောယန္တရားအားဖြင့်မောင်းထုတ်ခံအာရုံ-ရှာကြံအပြုအမူ၏ပထမဦးဆုံးတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားများ, ပေး။ သူတို့ကအစွန်းရောက်အာရုံ-ရှာတဲ့အားနည်းချက်အချက်ပါဝငျသညျ့အတှကျအ psychopathologies ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက်မူဘောင်သည်။
Sensation-ရှာ "ပြင်းထန်သောပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်ခန့်မှန်းရခက်" အာရုံခံအတွေ့အကြုံများ (များအတွက်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာတစ်ဦးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရိုဖြစ်ပါသည်Zuckerman, 1994) ထို (အရေးပါသောနှင့်ကောင်းစွာ-conceptualized တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်ရှိပါသည်Roberti, 2004) ။ လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်နှစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ပြီးအမျိုးမျိုးသောအာရုံ-ရှာ-type အမျိုးအစားလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု (ဥပမာအပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု, အန္တရာယ်များမောင်းနှင်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို) covaries (Carmody et al ။ , 1985; ရှငျဘုရငျ et al ။ , 2012) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အာရုံခံစားမှု-ရှာကြံကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏မေးခွန်းလွှာ-based အတိုင်းအတာမြင့်မားတဲ့ heritability ခန့်မှန်းချက်များ (40-60%; Koopmans et al ။ , 1995; Stoel et al ။ , 2006) အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှမြင့်မားတည်ငြိမ်ကျန်ရှိသောရမှတ်များအတွက်ရာထူးအမိန့်ကွဲပြားမှုနှင့်အတူ (Terracciano et al ။ , 2011).
အစွန်းရောက်အာရုံ-ရှာ (ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်လောင်းကစားစွဲလမ်းအပါအဝင်မြင့်မားသောလူမှုရေးကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူ psychopathologies အမျိုးမျိုးအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးZuckerman, 1994; Roberti, 2004; ပယ်ရီ et al ။ , 2011) ။ (ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီများထဲတွင်ပိုမိုမြင့်မားအာရုံ-ရှာကြံရမှတ်စတင်ခြင်း၏အစောပိုင်းအသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်, polysubstance အသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်, ပိုမိုပြင်းထန် functional ဖြစ်စေချွတ်ယွင်းခြင်း, ဆင်းရဲတဲ့ခြုံငုံကုသမှုရလဒ်ကိုဘောလုံးကို et al ။ , 1994; Staiger et al ။ , 2007; Lackner et al ။ , 2013) ။ လူ့အာရုံ-ရှာအခြေခံယန္တရား၏ identification ထို့ကြောင့်မြင့်မားတဲ့လက်တွေ့ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဖို့ဖွယ်ရှိသည်။
အာရုံခံစားမှု-ရှာ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ (ဝတ္ထုသို့မဟုတ်အာရုံခံဆွ-inducing ရွေးချယ်မှုရွေးချယ်စရာများအတွက်တစ်ဦးချင်းဦးစားပေးဖြန်ဖြေအတွက်, အထူးသဖြင့် D2 အမျိုးအစားများ (D2 / D3 / D4) dopamine receptors မှာ striatal dopamine function ကိုအတွက်အပြောင်းအလဲပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပါပြီBardo et al ။ , 1996; Blanchard ဖြစ်ပြီး et al ။ , 2009; ရှင် et al ။ , 2010) ။ striatal dopaminergic ဂီယာ၏ထိရောက်မှုအဓိကလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ချဉ်းကပ်အပြုအမူတွေ၏သန်စွမ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့စဉ်းစားသည်နှင့်အမျှ (Ikemoto, 2007; Robbins နှင့် Everitt, 2007), တစျခုသီအိုရီအကောင့် (အာရုံ-ရှာအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုများအတွက်အဓိကအခြေခံဝတ္ထုနှင့်ပြင်းထန်သောလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် dopaminergic ချဉ်းကပ်-ဆုတ်ခွာယန္တရားများ၏ differential ကို activation အတွက်ကြောင်းအဆိုတင်သွင်းZuckerman, 1990).
ဒီအမြင်နှင့်ကိုက်ညီ, မျိုးဗီဇများနှင့်ပေသက်သေအထောက်အထား, လူ့အာရုံ-ရှာကြံ (ဥပမာအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအတွက် D2-type အမျိုးအစား receptors မှာ function ကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပါတယ် Hamidovic et al ။ , 2009; Gjedde et al ။ , 2010) ။ အရေးကြီးသည်မှာသို့သော် preclinical စာပေများတွင်သူတို့အားအလားတူအပြုအမူ Paradigm မရှိခြင်းကြောင့်လူသားတွေအတွက်တိုက်ရိုက်ချဉ်းကပ်-ရှောင်ရှားခြင်းအယူအဆစမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှမမူကြောင်းကိုအဓိပ်ပာခဲ့သညျ။ ထိုသို့သောတစ်ခုချဉ်းကပ်မှုယခင်က (Impulse ၏အခြားရှုထောငျ့မှရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူမြင့်မားအသီးအနှံများသက်သေပြလျက်ရှိသည်Winstanley, 2011; Jupp နှင့် Dalley, 2014).
ဤတွင်ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဝန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်အတွင်း Self-စီမံခန့်ခွဲပျော့ (သို့သော် nonpainful) အခွင့်အလမ်းပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းလူ့အာရုံ-ရှာကဲ့သို့သောအပြုအမူတစ်ခုဝတ္ထုဆာတာဝန်လျှပ်စစ်ဆွ (MES), စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဤသည်တာဝန် (ကြွက်များအတွက်တီထွင်မကြာသေးခင်ကအော်ပရေတာအာရုံ-ရှာကြံပါရာဒိုင်းမှအလားတူဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်Olsen နှင့် Winder, 2009) ။ ကျနော်တို့လာမယ့်ကျန်းမာသန်စွမ်းစေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားနမူနာများတွင်တာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် D2 dopamine အဲဒီ receptor ရန် haloperidol များ၏သက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တစ်ခုအတွင်း-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ရိုအာရုံ-ရှာမြင့်မား (1) တစ်ဦးချင်းစီထိုကဲ့သို့သော "ပြင်းထန်သောနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သော" အာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုတွေ့ကြုံခံစားရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအပြုသဘောစီးပွားရေးတန်ဖိုးသတ်မှတ်မယ်လို့; ကျနော်တို့ကခန့်မှန်း (2) ဒီ preference ကိုဤအလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုချဉ်းကပ်ကဲ့သို့ speeded ဆွေမျိုးတုံ့ပြန်မှုအချိန်အတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်ဟု; နှင့် (3) ထိုသို့သော "အပြုအမူအာရုံ-ရှာကြံ" (အခြေခံအာရုံ-ရှာကြံစွမ်းဆောင်ရည်ပေါ် မူတည်. D2 receptors မှာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်နှောင့်အယှက်မည်ဖြစ်ကြောင်းNorbury et al ။ , 2013).
လေးဆယ်ငါးယောက်ကျန်းမာပါဝင်သူ (28 အမျိုးသမီး), အသက်အရွယ် 24.3 (SD က 3.55) ကိုဆိုလိုတာတွေ့နောက်ထပ်လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များအတွက် (အင်တာနက်ကြော်ငြာများမှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြ စားပွဲတင် 1) ။ ဒါကနမူနာအရွယ်အစား (ကျွန်တော်တို့ကိုထကြွလွယ်သောအပြုအမူ၏အခြားရှုထောငျ့၏အမူအကျင့်များနှင့်မေးခွန်းလွှာအစီအမံများအကြားဆက်စပ်မှုခွန်အား၌ကျိုးနွံဖြစ်ကြောင်းယခင်တွေ့ရှိချက်များအပေါ် အခြေခံ. တာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် Self-အစီရင်ခံအာရုံ-ရှာကြံရိုအကြားအလယ်အလတ်-အစွမ်းသတ္တိကိုကြားဆက်ဆံရေး detect လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည် ဆက်စပ်မှု 0.40 မှတက် coefficients; ဥပမာ Helmers et al ။ , 1995; မစ်ချယ်, 1999) ။ တစ်ဦးတစ်ဦးဦးပါဝါတွက်ချက်မှု 44 တစ်နမူနာအရွယ်အစား 0.40 ၏ 80% နှင့် alpha တစ်သမားရိုးကျအာဏာမှာ 0.05 တစ်ဆက်စပ်မှုကိန်း detect လုပ်ဖို့လိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်။ ဖယ်စံမဆိုလက်ရှိသို့မဟုတ်အတိတ်အာရုံကြောသို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါနာမကျန်း, ဒါမှမဟုတ်ဦးခေါင်းကိုဒဏ်ရာပါဝင်သည်။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုအသိပေးပြုချက်ရေးထားပေးနှင့်လေ့လာမှု University College London မှကျင့်ဝတ်ကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
n (အမျိုးသမီး) 45 (28) 28 (0)
အသက်အရွယ် (နှစ်) 24.3 (3.55) 22.3 (2.74)
ပညာရေး၏အနှစ် 16.1 (3.1) -
ကျီးရဲ့ 12-အေပီအမ်ကရမှတ် - 9.1 (2.5)
ပြောလေ-VR စုစုပေါင်းရမှတ် (အကွာအဝေး) 261 (46) (162-352) -
UPPS အက်စ်အက်စ်ရမှတ် (အကွာအဝေး) - 23.2 (5.8) (18-47)
အရက် (တစ်ပတ်ကိုအချိုရည်) 3.7 (4.5) 5.9 (8.7)
ဆေးရွက်ကြီး (တစ်ပတ်ကိုစီးကရက်) 4.1 (10.2) 8.4 (18.3)
အဘယ်သူမျှမ 30 18
ဆေးခြောက် (အစဉ်အဆက်) 8 5
ဆေးခြောက် (ပုံမှန်)51
လှုံ့ဆော်မှုအသုံးပြုမှု (အစဉ်အမြဲ)24
ဘယ်တော့မှမ 39 17
တစ်နှစ်လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ53
တစ်လလျှင်အကြိမ်များစွာ 1 7
အပတ်စဉ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို01
အတိုကောက်: Raven ရဲ့ 12-အေပီအမ်က = Raven ရဲ့အဆင့်မြင့်တိုးတက်ရေးပါတီမက်တရစ်ကို non-နှုတ်အိုင်ကျူစမ်းသပ် (12-item ကိုဗားရှင်း); ပြောလေ-VR, Sensation-ရှာအံ့သောငှါစကေးဗားရှင်း V ကို (ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော); UPPS အက်စ်အက်စ်, Impulse စကေးအာရုံ-ရှာကြံ subscale ရမှတ် UPPS ။
အခွားသောလူဦးရေရမှတ်ကနောက်ဆုံး 12 လအတွင်းအပြုအမူကိုရည်ညွှန်း။ မဟုတ်ရင်သတ်မှတ်ထားသောမဟုတ်လျှင်, ကိန်းဂဏန်းများအသီးအသီးအုပ်စု (SD) ကိုဆိုလိုတာကိုကိုယ်စားပြုသည်။
Sensation-ရှာ Task ကို
သင်တန်းသားများကိုသူတို့အနေနဲ့ "ပြင်းထန်သော" အာရုံခံလှုံ့ဆော်မှု (MES) ကိုလက်ခံရရှိရန်အခွင့်အလမ်းမှတာဝန်ပေးအပ် (အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘော) ကိုတိကျသောစီးပွားရေးတန်ဖိုးစုံစမ်းဖို့ဒီဇိုင်းတစ်ခုဝတ္ထုအာရုံ-ရှာကြံတာဝန်ပြီးစီး။ task ကို (ဝယ်ယူအဆင့်) ၏ပထမဦးဆုံးအစိတျအပိုငျးမှာတော့သူတို့ရိုးရိုးအမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားသောစိတ္တဇအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှု (အေးစက်လှုံ့ဆော်မှု [CSS]) နဲ့ဆက်စပ်အချက်တန်ဖိုးများကိုသိရှိခဲ့၏။ ရှစ်ကွဲပြားခြားနားသော fractals2ဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တန်ဖိုးများ (4, 25, 50, ဒါမှမဟုတ် 75 မှတ်) ၏တစ်ဦးချင်းစီမှတာဝန်ပေးအပ်သူတို့ထဲက 100 နှင့်အတူ, CSS အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တိုင်းရုံးတင်စစ်ဆေးခုနှစ်, fractals (10 ကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်မှုအမျိုးအစားများကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျော, ဖြစ်စေကပ်လျက်သို့မဟုတ်ညီမျှအမှတ်တန်ဖိုးကိုလှုံ့ဆော်မှုများထားရှိရေးဖို့ကန့်သတ်, အားလုံးအဖြစ်တင်ဆက်ခဲ့သည်ပုံ 1).
Sensation-ရှာကြံတာဝန်။ task ကို (ဝယ်ယူအဆင့်) ၏ပထမဦးဆုံးအစိတျအပိုငျးမှာတော့သင်တန်းသားများကိုစိတ္တဇ fractal ပုံရိပ်တွေအားလုံးအကြားအတင်းအဓမ္မရွေးချယ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတစ်စီးရီးနဲ့အတူတင်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ (; အရာနှင့်အတူရွေးချယ်မှု option ကိုတိုင်းပါဝင်သူများအတွက်ကျပန်းကိုယ်စားပြုတစ်ဦးအထူးသဖြင့် fractal 8, 2, 4, ဒါမှမဟုတ် 25 မှတ်) 50 ဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တန်ဖိုးများကိုအသီးအသီးမှတာဝန်ပေးအပ် 75 ကွဲပြားခြားနားသော CSS နှင့်အတူ 100 ကွဲပြားခြားနားသော fractal လှုံ့ဆော်မှု (အေးစက်လှုံ့ဆော်မှု [CSS]) ရှိခဲ့သည်။ ရှေးခယျြမှုအားလုံး 10 ရုံးတင်စစ်ဆေးအမျိုးအစားများကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျော, ဖြစ်စေကပ်လျက်သို့မဟုတ်ညီမျှအချက်များတန်ဖိုးကိုလှုံ့ဆော်မှုများထားရှိရေးဖို့ကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအချက်များတန်ဖိုးကိုရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သောရှိရာနောက်ဆုံး 80 စမ်းသပ်မှုတွေကျော်≥80% ပိုမိုမြင့်မားအချက်များတန်ဖိုးကိုရွေးချယ်မှုစွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုစံနှုန်းအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီသည်အထိတာဝန်များ၏ဝယ်ယူအဆင့် 10 စမ်းသပ်မှုတွေ၏နိမ့်ဆုံးအဘို့အဆက်ပြောသည်။ ဒီသင်ယူဇာတ်စင်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်ပြီးနောက်သင်တန်းသားများကို task ကို (စမ်းသပ်အဆင့်) ၏ဒုတိယအပိုင်းတဲ့အထိတိုးတက်။ စမ်းသပ်အဆင့်အဘို့, သင်တန်းသားများကိုအရင်ကဲ့သို့အားလုံးလှုံ့ဆော်မှုတူညီတဲ့အချက်တွေကိုတန်ဖိုးကိုနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ညွှန်ကြားခဲ့ကြသည်ပေမယ့်လှုံ့ဆော်မှုအချို့ယခုပျော့လျှပ်စစ်လှုံ့ဆော်မှု (MES), သူတို့ nondominant လက်မှ (အများ၏ပြင်းအားကိုလက်ခံရရှိသည့်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ MES တစ်ဦးချင်း) မတိုင်မီတာဝန်စတင်ရန် "နာကျင်လှုံ့ဆော်ဖို့မဟုတ်ဘဲ" ခံရဖို့ချိန်ညှိခဲ့ပါတယ်။ အထူးသ, ထိုလှုံ့ဆော်မှုများ၏တဦးတည်း-တစ်ဝက်စမ်းသပ်မှုတွေ 1 အမျိုးအစားများ3သို့ကျဆင်းသွားကြောင်းထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက် CS + s (MES ၏အခွင့်အလမ်း) နှင့်အခြားတစ်ဝက် CS-S (MES မရှိအခွင့်အလမ်း) အဖြစ်သတ်မှတ်ထားဖြစ်လာခဲ့သည်: အ CS + ရှိရာရှိသူများ အောက်ပိုင်းအချက်များ option ကိုထိုရှိရာ CS + အရေးကြီးသည်မှာအဆိုပါ CS + နှင့် CS- လှုံ့ဆော်မှုတန်းတူမှတ်တန်ဖိုးဘယ်မှာရှိသူတို့သည်မြင့်မားအချက်များ option ကိုကြီးနှင့်။ အဆိုပါထိတွေ့နိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုများ salience တိုးမြှင့်ဖို့, လျှပ်စစ်ဆွလက်ခံရရှိဖြစ်ပျက်မှုနှင့်အချိန်ကိုက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦး CS + လှုံ့ဆော်မှုများရွေးချယ်ခြင်းကိုပေးသော MES ကိုလက်ခံရရှိများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေပါဝင်သူတစ်ဦးအလွတ်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူတင်ပြရာတစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦး 0.75-ms အချင်းချင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုကြားကာလ (ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI), စဉ်အတွင်းကျပန်းဖြစ်ပေါ်သည့် MES စတင်ခြင်းနှင့်အတူ 2500 ဖြစ်ခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကိုကို (နောက်ဆုံးတစ်ဆယ်စမ်းသပ်မှုတွေကျော်, ဒီဖြစ်နိုင်သောရှိရာစမ်းသပ်မှုတွေ၏ 80% သို့မဟုတ် သာ. ကြီးပေါ်တွင်ပိုမိုမြင့်မားမှတ်တန်ဖိုးဆက်စပ် fractal ရွေးချယ်ရာတွင်) စွမ်းဆောင်ရည်တစ်စံနှုန်းအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီအထိဝယ်ယူအဆင့် 80 စမ်းသပ်မှုတွေ၏နိမ့်ဆုံးအဘို့အဆက်ပြောသည်။ ဒီသင်ယူဇာတ်စင်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်ပြီးနောက်သင်တန်းသားများကို task ကို (စမ်းသပ်အဆင့်) ၏ဒုတိယအပိုင်းတဲ့အထိတိုးတက်။
စမ်းသပ်အဆင့်မှာရှေးခယျြမှုလှုံ့ဆော်မှုတဦး-ဝက်လက်တစ် nonpainful MES ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူဒါ့အပြင်ဆက်စပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကား fractals ယခု မှစ. တွေ့မြင်ပြည့်အသေးစိတ်ကို (CS + s အဖြစ်ရည်ညွှန်းပါလိမ့်မည် ပုံ 1) ။ အခြား fractals လျှပ်စစ်ဆွနဲ့ဆက်စပ်မရခဲ့သည်နှင့်အဒါ CS- အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်။ အခြား CS- (MES မရှိအခွင့်အလမ်း) နေစဉ်တစ်ဦးချင်းစီအချက်များကိုတန်ဖိုးကိုအဘို့, ဆက်စပ်နေသော fractals တ CS + (MES ၏အခွင့်အလမ်း) ဖြစ်လာခဲ့သည်။ CS + အောက်ပိုင်းအချက်များ option ကိုရှိရာသူများ, CS + အရေးကြီးသည်မှာမြင့်မားအချက်များ option ကိုကြီးဘယ်မှာသူတို့အား, အ CS + နှင့် CS- လှုံ့ဆော်မှုတန်းတူမှတ်တန်ဖိုးဘယ်မှာရှိသူတို့အား: ဒီ3ရုံးတင်စစ်ဆေးအမျိုးအစားများကိုလြှော့။
သင်တန်းသားများကိုအရှင်သာခြားနားချက်ယခုရွေးချယ်မှုရွေးချယ်စရာတွေထဲက-တစ်ဝက်နှစ်ဦးစလုံး fractals တူညီတဲ့အချက်တွေကိုတန်ဖိုးဘယ်မှာရှိစမ်းသပ်မှုတွေပေါ်တွင်အရေးကြီးအပါအဝင် MES ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ fractal အားလုံးအကြားရွေးချယ်မှုအောင်ကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ သော့ကိုစမ်းသပ်မေးခှနျးကိုအချို့သင်တန်းသားများကို '' ရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်တန်းတူမှတ်၏တန်ဖိုး, သို့မဟုတ် CS- ထက်ပင်လျော့နည်းခဲ့အခါ CS + လှုံ့ဆော်မှုကိုရွေးချယ်ခြင်းဆီသို့ဦးတည် biased မည်ဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်လက်ခံရရှိရန်အခွင့်အလမ်းဖို့တာဝန်အသီးအသီးပါဝင်သူဆီသို့သို့မဟုတ်သွား CS + option ကို၏ဆွေမျိုးမှတ်တန်ဖိုးလေးစားမှုနှင့်အတူ CS + လှုံ့ဆော်မှု, (အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘော) ကိုစီးပွားရေးတန်ဖိုးအရှင်ခွင့်ပြုခဲ့အတိအကျတွက်ချက်မှုကနေသင်တန်းသားများကို '' ရွေးချယ်မှုအတွက်ဘက်လိုက်မှု၏ဒီဂရီ ပြင်းထန်သောအာရုံခံလှုံ့ဆော်မှု (Computer မော်ဒယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ပါ) ။
သင်တန်းသားများကို 100 စမ်းသပ်အဆင့်စမ်းသပ်မှုတွေ (ရုံးတင်စစ်ဆေးအမျိုးအစားနှုန်း 10) ပြီးစီးခဲ့နှင့်သူတို့နီးပါးရှိပါသည်ရမှတ်စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကမှီခိုသောအဆုံးမှာငွေသားဆုကြေးငွေပေးဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါထိတွေ့နိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုများ salience တိုးမြှင့်ဖို့, MES လက်ခံရရှိဖြစ်ပျက်မှုနှင့်အချိန်ကိုက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦး CS + လှုံ့ဆော်မှုများရွေးချယ်ခြင်းကိုပေးသော MES ကိုလက်ခံရရှိများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတစ် 0.75-ms အချင်းချင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုကြားကာလအတွင်းမှာကျပန်းဖြစ်ပေါ် MES စတင်ခြင်းနှင့်အတူ 2500 ဖြစ်ခဲ့သည်။
task ကိုစတင်ခင်မှာ, သင်တန်းသားများကို (မကြိုက်နှစ်သက် "" တူ "မှအထိ) မှာကွန်ပျူတာအမြင်အာရုံ analogue စကေး (vas) ရက်တွင်ပါရာဒိုင်းများတွင်အသုံးပြုရမည့် fractals ၏အသီးအသီးအဘို့မိမိတို့ preference ကိုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုအတိုင်းအရှည် (ဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါရှုပ်ထွေး၏နိဒါန်းတွင်အောက်ပါ) ကိုစမ်းသပ်မှုရဲ့အဆုံးမှာ (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးချင်းစီ CS နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်တွေကိုတန်ဖိုးကိုသင်ယူပြီးနောက်) နှင့်တတိယအကြိမ်ဝယ်ယူအဆင့်ပြီးစီးအောက်ပါဒုတိယအကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲခဲ့သည်။ အဆိုပါ MES ကယ်နှုတ်တော်မူရန်အသုံးပြုယန္တရားနှင့်ဆွ parameters များကိုအသေးစိတ်အတွက်ကြည့်ရှု နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက်.
သဘောတူညီခကျြမြားနှငျ့တာဝန်ညွှန်ကြားချက်ပြီးနောက်လျှပ်စစ်ဆွ၏လွှဲခွင်တစ်ဦးစံအလုပ်-up, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကနေတဆင့်ချင်းစီပါဝင်သူများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီချိန်ညှိခဲ့ပါတယ်။ (; ယေဘုယျအားဖြင့်သာကိုယ့်ရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. အဖြစ်ပါဝင်သူများကဖော်ပြခဲ့သည် 0.5 MA) နှင့်ဆွဟာ vas အပေါ်6ထဲက 10 အဖြစ် rated ခဲ့သည်သည်အထိတဖြည်းဖြည်းလက်ရှိခွန်အား၌တိုးပွားလာအထူးသင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးအလွန်နိမ့်လွှဲခွင်မှာစတင်တစ်ခုတည်းဆွပဲမျိုးစုံဆက်တိုက်ရရှိခဲ့0(ပဲရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. ) မှ 10 (နာကျင်သို့မဟုတ်မနှစ်မြို့ဖွယ်), သင်တန်းသားများကိုခံရသကဲ့သို့အာရုံ၏ဖော်ပြချက်ထောက်ခံထားတဲ့မှာ "နာကျင်လှုံ့ဆော်ဖို့မဟုတ်။ " ဒါကလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုက်ညီမှုသေချာစေရန်တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူများအတွက်နှစ်ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲခဲ့သည်အဆင့်အထိ။
အဆိုပါ Sensation-ရှာအံ့သောငှါစကေးဗားရှင်း V ကိုတစ်ဦးပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအတိုင်းအတာ (: သင်တန်းသားများကိုလည်းအများအပြား Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံပြီးစီးZuckerman, 1994; မီးခိုးရောင်နှင့် Wilson က, 2007); hedonic သေံတစ်ဦးအတိုင်းအရှည်, အ Snaith-Hamilton က Anhedonia စကေး (Snaith et al ။ , 1995); နှင့်ပြည်နယ်-စရိုက်များတော့ပူပန် Inventory ၏ရိုစကေး (Spielberg et al ။ , 1970) ။ အဆုံးစွန်သော2အစီအမံ MES preference ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုစိုးရိမ်စိတ်သို့မဟုတ်လက်ရှိပြည်နယ် (တစ်ဦး) hedonia ထက်နှုန်း se အာရုံ-ရှာကြံကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအားဖြင့်မောင်းထုတ်ခံရစရိုက်များနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေစမ်းသပ်ဖို့ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ပညာရေး, စီးကရက်နှင့်အရက်သုံးစွဲမှု၏အနှစ်နှင့် ပတ်သက်. လူဦးရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်, အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများနှင့်လောင်းကစားဝိုင်း-related လှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများအကြိမ်ရေလည်းစုဆောင်းခဲ့သည်။
: စမ်းသပ်အဆင့်ဒေတာအတွက်ကြောင့်2CSS, A နှင့် B အကြားရွေးချယ်မှု (ကအဆိုပါ CS + လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်နှင့် B တို့သည် CS- သည်အဘယ်မှာရှိ), အဖြစ်ကိုယ်စားပြုနိုင်ယူဆခဲ့သည်
VA= RA+ θ
ဘယ်မှာ R ကိုX အဆိုပါ MES လက်ခံရရှိရန်အခွင့်အလမ်းမှတာဝန်ပေးအပ် (အချက်များမှာ) အပိုဆောင်းတန်ဖိုးကိုဖြစ်ပါတယ်θလှုံ့ဆော်မှု X ကို၏အချက်တန်ဖိုးကို, (အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘော) ဖြစ်ပြီး, V ကိုX option တခုစီ၏အလုံးစုံတန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
ဒါကမော်ဒယ်ထို့နောက် sigmoidal ရွေးချယ်မှု (softmax) function ကိုကနေတဆင့်ချင်းစီပါဝင်သူအားလုံးကိုစမ်းသပ်အဆင့်ရွေးချယ်မှုဒေတာကိုဖြတ်ပြီးတပ်ဆင်ခဲ့သည်:
P(ရှေးခယျြ A) = 1 / (1 + EXP(-β*(VA-VB)))
θနှင့်βအခမဲ့ parameters များကိုတန်ဖိုးများ (ထို softmax အပူချိန် parameter သည်, ရှေးခယျြမှု stochasticity တစ်ဦးအတိုင်းအရှည်) မှတ်တမ်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုအကျယ်ချဲ့သုံးပြီးဘာသာရပ်-by-ဘာသာရပ်အခြေခံပေါ်မှာ data ကိုမှတပ်ဆင်ခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားသင်တန်းသားများကို (ဤသူတို့သညျမွငျ့မားအချက်များ option ကိုခဲ့ကြသည်ရှိရာစမ်းသပ်မှုတွေ၏အောက်ပိုင်းအချက်များ option ကို, 20.4% (17.6) ကိုယ်စားပြုရှိရာစမ်းသပ်မှုတွေ၏ 68.9% (SD က 24.8) ရက်တွင် MES-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှု (CS +) ကို ရွေးချယ်. နှင့် 45.2% CS + နှင့် CS- လှုံ့ဆော်မှုအချက်များတန်ဖိုးညီမျှခဲ့ကြဘယ်မှာစမ်းသပ်မှုတွေ၏ 19.9) ။ CS + လှုံ့ဆော်မှုများ၏အချိုးကျရွေးချယ်မှုအပေါ်ရုံးတင်စစ်ဆေးအမျိုးအစားသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှု (ရှိခဲ့သည်F 2,88= 157.29, P<0.001) ။ Posthoc t စမ်းသပ်မှုအလုံးစုံသင်တန်းသားများကိုညီမျှအမှတ်စမ်းသပ်မှုတွေထက်နိမ့်အချက်စမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်မကြာခဏသိသိသာသာလျော့နည်း CS + option ကိုရွေးခြင်းနှင့်သိသိသာသာပိုပြီးမကြာခဏပိုမိုမြင့်မားအမှတ်စမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်တန်းတူအချက်စမ်းသပ်မှုတွေထက် (ထုတ်ဖော်t 44= -11.997, P<.001; t 44= -8.102, P<အသီးသီး .001,) ။
အရေးကြီးတာက, CS + နှင့် CS- options များမှတ်တန်ဖိုးညီမျှခဲ့ကြဘယ်မှာစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ် MES-ဆက်စပ် option ကိုဦးစားပေးများတွင်သိသိသာသာအပြောင်းအလဲရှိခဲ့သည်။ CS + လှုံ့ဆော်မှုများ၏အချိုးကျရွေးချယ်မှု (7.5% ကနေ 92.5% အရွယ်ရှိဆိုလိုပုံ 2A; ဆွေမျိုး CS0၏ + တန်ဖိုးကို) ။ ဤအစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်သိသိသာသာဘက်လိုက်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုခန့်မှန်းချက်ဒွိစုံဖြန့်ဖြူးနမူနာကောကျခွငျးအားဖွငျ့ကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါတယ်; 40 စမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ 0.05 တစ်ခု alpha အဘို့, ဒီခုံသိသိသာသာနိမ့်ရွေးချယ်မှုများအတွက်သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့ရွေးချယ်မှုနှင့် 26 / 40 (0.65) အတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 13 / 40 (0.35) ဖြစ်ပါသည်။ ဤအတံခါးခုံပေါ်အခြေခံပြီးတက်ရောက်လာသူများ၏ 8 / 45 (သို့မဟုတ် 18%) CS + လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အချိုးအစားကို ရွေးချယ်. , တစ်နည်းအတွက်သိသိသာသာ MES ရှာသောအခါသင်တန်းသားများ၏ 13 / 45 (29%) ကိုသိသိသာသာ CS + options များကိုရှောင်ရှား။
အလုပ်တခုကိုစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် Interindividual မူကွဲ။ (A) အပျော့စားလျှပ်စစ်ဆွရွေးချယ်ရာတွင်၏ဖြစ်နိုင်ခြေများအတွက်တစ်ဦးချင်း psychometric လုပ်ဆောင်ချက်များကို (MES; င်း၏ဆွေမျိုးအချက်များကိုတစ် function ကိုအဖြစ် CS + သို့မဟုတ် MES-ဆက်စပ်) option ကိုအားလုံးရုံးတင်စစ်ဆေးအမျိုးအစားများကိုဖြတ်ပြီးရွေးချယ်မှုဒေတာတစ်ခုချင်းစီမှပါဝင်သူများအတွက်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ (ငွေကြေး) တန်ဖိုးကို, (အနက်ရောင်စက်ဝိုင်းအမှန်တကယ်ညွှန်ပြ တစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအမျိုးအစားများအတွက်အချိုးကျရွေးချယ်မှု) ။ တစ်ခုချင်းစီကို function ကို၏ညာဘက် / လက်ဝဲဘာသာပြန်ချက်အဆိုပါ softmax အပူချိန် parameter သည်β (သင်တန်းသားများကို '' ရွေးချယ်မှုများ stochasticity တစ်ဦးအတိုင်းအရှည်) ကဆုံးဖြတ်သည် function ကို၏ gradient ကိုအတူရွေးချယ်မှုအပေါ် MES တန်ဖိုး (သို့မဟုတ်θ) ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ function ကိုတစ်ဦးဘယ်ပြပြောင်းကုန်ပြီရွေးချယ်မှုအပေါ်ပြင်းထန်သောထိတွေ့နိုင်သောဆွဘို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်ထင်ဟပ်သောတစ်ဦးတည်းမှတ်-based ရွေးချယ်မှုကနေမျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုထက် MES-ဆက်စပ်ရွေးချယ်စရာပိုမိုရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ (Bတစ်ဦးချင်းဟာ MES လက်ခံရရှိရန်အခွင့်အလမ်းဖို့တာဝန်က) တန်ဖိုး (θ) ပြင်းပြင်းထန်ထန် (ပျမ်းမျှ RT ကို CS- လှုံ့ဆော်မှု vs CS + မှရွေးချယ်မှုတုံ့ပြန်မှုကြိမ်မှာသူတို့ရဲ့ခြားနားချက် (RTs) ခန့်မှန်းCS + - ပျမ်းမျှ RT ကိုCS-; r = -0.690, P<.001) ။ အပိုအာရုံခံဆွဘို့အခွင့်အလမ်းကဆန္ဒရှိခဲ့တော်မူသောအဘို့သင်တန်းသားများကိုကို (CS + ၏အနိမ့်အချိုးအစားရွေးချယ်မှု; အောက်ခြေညာဘက် quadrant) တွင်ဤရွေးချယ်မှုရွေးချယ်မှုနှေးကွေးပေမယ့်အစာစားချင်စိတ်ကို (CS + မြင့်မားရွေးချယ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်ဘယ်သူကိုများအတွက်သင်တန်းသားများအတွက်ရွေးချယ်မှု sped; ထိပ်တန်း လက်ဝဲ quadrant, လိမ္မော်ရောင်ရိပ်) ။ Black ကလိုင်းများ 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလညွှန်ပြ dashed ။ ဎ = 45 ။
တသမတ်တည်း MES-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုမြင့်မားရွေးချယ်မှုပင် CS + အောက်ပိုင်းအချက်များတန်ဖိုးကို option ကို, စီးပွားရေးတန်ဖိုးသည်, ပါဝင်ပတ်သက်ယဇျပူဇျော (ရှိရာရုံးတင်စစ်ဆေးအမျိုးအစားများအပေါ်သင်တန်းသားများ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်ပုံ 2A25 ၏, ဆွေမျိုး CS + တန်ဖိုးကို) ။
(preference ကိုနှိုးဆွအသစ်အဆန်းလျော့ကျလာနှင့်အတူပြောင်းလဲသွားသလားဆိုတာကိုဆိုလိုသည်မှာ) ကိုတာဝန်များ၏သင်တန်းကာလအတွင်းသိသိသာသာကွဲပြားသည့် MES-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှု၏သင်တန်းသားများကို '' ရှေးခယျြမှုရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့, စမ်းသပ်အဆင့်စမ်းသပ်မှုတွေ4ကဏ္ဍများသို့ binned ခဲ့ကြသည်။ အချိန်အတွင်းမှာ-ဘာသာရပ်များအချက် (4 အဆင့်ဆင့်) နှင့်အတူတစ်ဦးကထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ ANOVA အားလုံးဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး CS + လှုံ့ဆော်မှုများ၏အချိုးကျရွေးချယ်မှု (အပေါ်အချိန်-on-တာဝန်တစ်ခုအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုအဘို့အဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိရp> .1) ။ ယေဘူယျအားဖြင့် CS + လှုံ့ဆော်မှုကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ဝယ်ယူသည့်အဆင့်တွင်စံသတ်မှတ်ချက်စွမ်းဆောင်ရည် (သို့) မှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှုအချိုးအစား (ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်စမ်းသပ်မှုများတွင်ပိုမိုမြင့်မားသောတန်ဖိုးရွေးချယ်မှု) သို့ရောက်ရန်စမ်းသပ်မှုများနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ (P> .1), MES- ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက် preference ကိုအလုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွင်းအချက်များတန်ဖိုးများ၏သင်ယူမှုနှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရကြောင်းအကြံပြု။ MES ဦး စားပေးသည်လက်ရှိ amplitude နှင့်လည်းမပတ်သက်ပါ။P> .1) ။
ကြည့်ရှုခြင်း, MES လက်ခံရရှိရန်အခွင့်အလမ်းမှတာဝန်ပေးအပ်ပါဝင်သူ (θ) အသေးစိတ်လုပ်ငန်းတာဝန်စွမ်းဆောင်ရည် (ကောင်းတစ်ခုအကောင့်ပေးကြောင်း (အချက်များအတွက်) တန်ဖိုးကိုဖော်ပြကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက်). ပုံ 2B တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူအားလုံးကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအမျိုးအစားများကိုဖြတ်ပြီးရွေးချယ်မှုဒေတာဖို့မော်ဒယ်သငျ့အားဖြင့်ထုတ်ပေးသည်၎င်း၏ဆွေမျိုးရမှတ် (ငွေကြေး) တန်ဖိုးတစ်ခု function ကိုအဖြစ် MES-ဆက်စပ် option ကို (CS +) ကိုရွေးချယ်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ psychometric ခါးဆစ်ပြသထားတယ်။
စီးပွားရေးဇုန်ပြင်းထန်သောအာရုံခံစိတ်ကြွဆေးလက်ခံဖို့အခွင့်အလမ်းမှ Assigned Value ကိုနှင့် Non-MES-Associated လှုံ့ဆော်မှု vs MES များအတွက်တုံ့ပြန်မှုအချိန်အကြားဆက်ဆံရေးမျိုး
CS- လှုံ့ဆော်မှု vs CS + များအတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အဆိုးရွေးချယ်မှုတုံ့ပြန်မှုအချိန်အတွက်ခြားနားချက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်တစ်ဦးချင်းθတန်ဖိုးများ (RT ကို) (r= -0.690, P<.001) (ပုံ 2B) ။ အထူးသ MES-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှု၏ကြီးမြတ်သောအချိုးအစားကို ရွေးချယ်. တဲ့သူသင်တန်းသားများကို (conditional ချဉ်းကပ်မှုရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များ) ဤလှုံ့ဆော်မှုရွေးချယ်ဖို့ပိုမြန်ခဲ့သညျ။ ဆနျ့ကငျြ, CS + လှုံ့ဆော်မှုရှောင်ရှားရန်တော်မှာအဘယ်သူသည်သင်တန်းသားများကို ((conditional ဖိနှိပ်မှုရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များ) သူတို့ကိုရွေးချယ်ဖို့နှေးကွေးခဲ့ကြPearce, 1997) ။ ကသာအဆုံးစွန်သောဝက်ကနေစမ်းသပ်မှုတွေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီဆက်ဆံရေးဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်သိသိသာသာကျန်ရစ်အဖြစ်ဤသည်, (နှစ်ဦးစလုံးအလုပ်၏သင်တန်းကျော် RT ကိုနှင့် CS + ၏ရွေးချယ်မှုဆိုလိုလျော့တဲ့သဘောထားကိုကြောင့်ဥပမာ) အချိန်-on-တာဝန်အကျိုးသက်ရောက်မှုမဟုတ်ခဲ့ စမ်းသပ်အဆင့် (စမ်းသပ်မှုတွေ၏ပထမနှစ်ဝက် r= -0.692, စမ်းသပ်မှုတွေ၏ဒုတိယထက်ဝက် r= -0.625, နှစ်ဦးစလုံး P<.001) ။
ပိုမိုမြင့်မားသောရိုအာရုံ-ရှာကြံသတင်းပေးပို့သူကိုသင်တန်းသားများကို MES လက်ခံရရှိရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုထက် သာ. ကြီးမြတ်သောတန်ဖိုးကိုတာဝန်ပေးအပ်ထိုကဲ့သို့သောကြောင်းသိသိသာသာအပြုသဘော Self-အစီရင်ခံအာရုံ-ရှာကြံရမှတ်နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်တစ်ဦးချင်းθတန်ဖိုးများ, (r= 0.325, P= .043) (ပုံ 3A).
အလုပ်တခုကိုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံများအကြားဆက်ဆံရေးမျိုး။ (က) စုစုပေါင်း Self-အစီရင်ခံအာရုံ-ရှာကြံရမှတ်သိသိသာသာအပြုသဘောပျော့လျှပ်စစ်ဆွ (MES) ကိုလက်ခံရရှိရန်အခွင့်အလမ်းမှတာဝန်ပေးအပ်တန်ဖိုးကိုသင်တန်းသားများနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည် (r= 0.325, P<.05) ။ (B) သည်ပြင်းထန်သောအာရုံခံဆွ (θ) ၏လက်ခံရရှိဖို့တာဝန်တန်ဖိုးကိုအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့သည်နှင့်အမြင်အာရုံ analogue စကေး (vas) တွင်ပြောင်းလဲမှုကိုဆိုလိုခြင်း (အပိုဆောင်းလျှပ်စစ်ဆွ၏နိဒါန်းတွင်အောက်ပါ MES-ဆက်နွယ် (CS +) လှုံ့ဆော်မှုများအဆင့်သတ်မှတ်ချက် "like နှိပ်"r= 0.368, P<.05) ။ dashed လိုင်းများ 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလဖော်ပြသည်။ ဎ = 45 ။
Theta တန်ဖိုးကိုစိုးရိမ်စိတ်, Self-အစီရင်ခံ hedonic သေံ, လက်ရှိလွှဲခွင်, ဒါမှမဟုတ်ပညာရေး၏အနှစ် (အားလုံးစရိုက်များမသက်ဆိုင်သောခဲ့သည် P> .1) ။ ဤအချက်အလက်များသိသိသာသာအပြုသဘောလွဲမှားနေသောကြောင့် nonparametric စမ်းသပ်မှု, Self- အစီရင်ခံအရက်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုနှင့်အတူအလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်ဆက်စပ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အမှီအခိုကင်းသောနမူနာများအရ MES ကိုလက်ခံရရှိရန်အပြုသဘောဆောင်သောတန်ဖိုးထားသူများ (ဆိုလိုသည်မှာθ> 0, n = 17) သည်တစ်ပတ်လျှင်စီးကရက်ပိုမိုသိသိသာသာဆေးလိပ်သောက်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ P= .006) နှင့်တစ်ပတ်လျှင်ပိုပြီးအရက်သောက်စားသုံးဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ nonsignificant လမ်းကြောင်းသစ်ပြသ (P(.098) သည် MES ကိုရှောင်ရှားလိုသောသူများ (ဆိုလိုသည်မှာθ <0, n = 28) (တစ်ပတ်လျှင်စီးကရက်ကိုဆိုလိုသည် 6.7 ± 10.4 vs 2.5 ± 9.9; တစ်ပတ်လျှင်အချိုရည် 4.2 ± 3.9 vs 3.4 ± 4.9) ။ လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်းအရက်သို့မဟုတ်ဆေးရွက်ကြီးမှအပမည်သည့်အပန်းဖြေမှုပစ္စည်းကိုမဆိုအရက်သို့မဟုတ်ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှု (အနိမ့်အမြင့် ၁၅ မှ n = ၃၀) တွင်မပြုခဲ့သောသူများသည်ယုတ်θတန်ဖိုးနှင့်သိသိသာသာကွာခြားမှုမရှိပါ (လွတ်လပ်သောနမူနာများ) t စမ်းသပ်မှု, P> .1) (စားပွဲတင် 1) ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းပါဝင်သူ (လွတ်လပ်သောနမူနာအကြားယုတ်θတန်ဖိုးကိုမကွာခြားချက်ရှိခဲ့သည် t စမ်းသပ်မှု, P> .1) ။
MES တန်ဖိုး (θ) ကိုလည်းသိသိသာသာအပြုသဘော rating အစည်းအဝေးများ2နှင့်3အကြား MES (ဆိုလိုသည်မှာ၏နိဒါန်းတွင်အောက်ပါ CS + လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် "like နှိပ်" vas အတွက်ပြောင်းလဲမှုကိုဆိုလိုတာနှင့်ဆက်စပ်သောရှိ၏ r= 0.368, P=.013) (ပုံ 3B) ။ အနုတ်လက္ခဏာတန်ဖိုးများနှင့်အတူသင်တန်းသားများကို၎င်းတို့၏ ratings လျော့ချဖို့တော်မှာစဉ်အပြုသဘော MES တန်ဖိုးများကိုတာဝန်ပေးသူကိုသင်တန်းသားများ, MES-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှု၎င်းတို့၏အကြိုက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တိုးမြှင့်ပေးရန်တော်မှာ။
စံပြ parameter သည် indexing ရွေးချယ်မှု stochasticity (β; အရာသင်တန်းသားများကို '' ရွေးချယ်မှုအတွက်2options များအကြားတန်ဖိုးခြားနားချက်ကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်ဖို့အတိုင်းအတာတစ်ခုအတိုင်းအတာ) ၏တန်ဖိုးများကို Self-အစီရင်ခံအာရုံ-ရှာကြံရိုနှင့်θတန်ဖိုးများ (နှစ်ဦးစလုံးမှမသက်ဆိုင်သောခဲ့ကြသည်P> .1) ပိုမိုမြင့်မားသောအာရုံခံစားမှု - ရှာဖွေခြင်းသို့မဟုတ် MES - ရှာဖွေခြင်းလူပုဂ္ဂိုလ်များသည်သူတို့၏ရွေးချယ်မှုအပြုအမူတွင်သူတို့၏နိမ့်သောအာရုံခံစားမှု - ရှာဖွေနေသည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထက်တန်ဖိုးနည်းသောမောင်းနှင်မှုမဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုသည်။
သင်တန်းသားများကို 30 ကျန်းမာအထီး, ယုတ်အသက်အရွယ် 22.3 (SD က 2.74) (ခဲ့ကြသည်စားပွဲတင် 1) ။ ဒီလေ့လာမှုမှာအမျိုးသမီးတွေအတွက်မူးယစ်ဆေး၏ကိုယ်ဝန် ထိုး. အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်အမျိုးသမီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် haloperidol ၏အလားအလာအပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ နမူနာအရွယ်အစား (ဎ = 30) ကြှနျုပျတို့လေ့လာ 1 အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့် MES တန်ဖိုးကို / RT ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုဆက်ဆံရေးခွန်အားအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။ ဒါဟာတစ်ကစစျမှနျတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား 29 ပါဝင်သူတစ်နမူနာကျွန်တော်တို့ကိုပုံတူပွား (နှင့်အပေါ် haloperidol မဆိုသက်ရောက်မှု detect) မှခွင့်ပြုသင့်ကြောင်းတွက်ချက်ခဲ့သည် r= 0.50% ၏တန်ခိုးတော်နှင့် 80 တစ်ခု alpha မှာ 0.05 ။ ဖယ်စံမဆိုလက်ရှိအဓိကနာမကျန်း, စိတ်ရောဂါနာမကျန်း၏လက်ရှိသို့မဟုတ်သမိုင်းဝင်အဖြစ်အပျက်နှင့် / သို့မဟုတ်ဦးခေါင်းဒဏ်ရာသမိုင်းပါဝင်သည်။ အားလုံးဘာသာရပ်များအကြောင်းကြားရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်ပေး၏နှင့်လေ့လာမှု University College London မှကျင့်ဝတ်ကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါလေ့လာမှုတစ်ခုအတွင်း-ဘာသာရပ်များ, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ဒီဇိုင်းအညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးဆုံး session တစ်ခုတွင်, သင်တန်းသားများကိုအကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက် ပေး. (ရလဒ်များအရအိပ်ယာသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးအောက်မှာ) နောက်ဆက်တွဲ2အစည်းအဝေးများဖြတ်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မည်သည့်အလေ့အကျင့်သက်ရောက်မှုများ၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်အာရုံခံစားမှု-ရှာကြံတာဝန်ပြီးစီး။ ထို့နောက် (ထို UPPS Impulse မေးခွန်းလွှာပြီးစီးWhiteside နှင့် Lynam, 2001), အရာ Impulse ရှုထောငျ့အာရုံ-ရှာ၏ subscales ရှိပြီး,3သည်အခြားအချက်တစ်ချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ-ဆင်းသက်လာ။ ဤသည်ကိုအတိုင်းအရှည် Impulse ၏အခြားမျိုးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါတာဝန်စွမ်းဆောင်မှုနှင့်အာရုံခံစားမှု-ရှာကြံကြားဆက်ဆံရေး၏ selection အကဲဖြတ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ UPPS ၏အာရုံခံစားမှု-ရှာကြံ subscale အများစုအတွက်ပြောလေ-V ကို၏ပစ္စည်းကနေဆင်းသက်လာနှင့်ထို့ကြောင့်2အစီအမံအပေါ်ရမှတ် (အလွန်အမင်း intercorrelate ဖြစ်ပါတယ်Whiteside နှင့် Lynam, 2001) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုတစ်စံချိန်စံညွှန်းမီ, nonverbal အတိုင်းအတာကိုလည်း (Raven ရဲ့ 12-item ကိုအဆင့်မြင့်တိုးတက်ရေးပါတီမက်တရစ်; Pearson ပညာရေး, 2010) အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
ဒုတိယနှင့်တတိယအစည်းအဝေးများတွင်, သင်တန်းသားများကိုနံနက်ယံ၌ရောက်ရှိလာခဲ့နှင့် (မူးယစ်ဆေးနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာချွတ်စွပ်အရွယ်အစားရှိကြ၏) 2.5mg haloperidol သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာဖြစ်စေအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ 2.5mg haloperidol ၏တစ်ဦးကထိုးကိုက်ညီမှုမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ရှိရာယခင်လေ့လာမှု (2mg ပေးကြောင်းထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်ရွေးကောက်တော်မူသဖြင့်, ဖရန့်နှင့် O'Reilly, 2006), ဒါပေမဲ့သိသိသာသာအနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်အပေါ် haloperidol ၏သက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ထိခိုက်စေတွေ့ရှိရာကအခြားအပြုအမူလေ့လာမှုများ (3mg များတွင်အသုံးပြုထက်လျော့နည်း; Zack နှင့် Poulos, 2007; Liem-Moolenaar et al ။ , 2010) ။ စမ်းသပ်ခြင်း (မူးယစ်ပလာစမာအဆင့်ဆင့်အများဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုရောက်ရန်ခွင့်ပြုနိုင်ရန်အတွက်တက်ဘလက်၏စားသုံးမိပြီးနောက် 2.5 နာရီစတင်Midha et al ။ , 1989; Nordstrom et al ။ , 1992).
ဒီလွှာမှကာလအပြီးတွင်တက်ရောက်လာသူများကိုစိတ်ဓါတ်များ၏ vas တင်းကိုထိခိုက်, အလားအလာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်မူးယစ်ဆေး / ရလဒ်များအရအိပ်ယာခြယ်လှယ်များ၏အသိပညာပြီးစီးခဲ့သည်။ psychoactive မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ၏စွဲလမ်းသုတေသနစင်တာကို Inventory (ARCI; မာတင် et al ။ , 1971) ဒီယခင်က haloperidol မှအထိခိုက်မခံဖြစ်ပြထားပြီးအဖြစ်ကိုလည်း (အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်Ramaekers et al ။ , 1999) ။ သင်တန်းသားများကိုထပ်မံ 1 ၏2စာ-ဂဏန်းအစားထိုးစမ်းသပ် (LDST ၏ညီမျှသောပုံစံများပြီးစီးခဲ့; ဗန် der Elst et al ။ , 2006ယေဘုယျ psychomotor နှင့်သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို၏), ရိုးရှင်းတဲ့ခဲတံ-and စက္ကူစမ်းသပ်။ သွေးလွှတ်ကြောနှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်သွေးဖိအားအကျူးနဲ့ post-မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါအာရုံ-ရှာကြံတာဝန်အဖြစ်လေ့လာ 1 များအတွက်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုအတွက်သင်တန်းသားများကို CS + / CS- (MES-ဆက်စပ်-ဆက်စပ် Non-MES vs) ပေါ်ဖြစ်ပေါ်၏သင်ယူမှုစမ်းသပ်ဖို့တာဝန်ရဲ့အဆုံးမှာ vas ratings တစ်ဦးအပိုဆောင်းထားပြီးစီးခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို CS အဘို့, သူတို့ကစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုရွေးချယ်ရာတွင်ယုံကြည်သည်ဘယ်လောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန် rated ပါဝင်သူ ( "ထိတ်လန့်၏အခွင့်အလမ်း" ကို "ထိတ်လန့်မရှိအခွင့်အလမ်း") လျှပ်စစ်ဆွလက်ခံရရှိများ၏အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သညျ။ တစ်ဦးချင်းစီအလုပ်-up, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပုဂ္ဂလဒိဋ္ပြင်းထန်မှု (အမှန်တကယ်လက်ရှိလွှဲခွင်ဆန့်ကျင်ကဲ့သို့) အစည်းအဝေးများဖြတ်ပြီးလိုက်ဖက်ခဲ့ပါတယ်ကြောင်းသေချာစေရန်တိုင်း session တစ်ခုအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေး / ရလဒ်များအရအိပ်ယာအလို့ငှာအဆိုပါ 1 စမ်းသပ်အစည်းအဝေးများ (လာရောက်လည်ပတ်သူအကြားထိုအတောအတွင်း2ရက်ပေါင်းခဲ့) အကြားတစ်ဦး 18-ရက်သတ္တပတ် washout ကာလ၏အနည်းဆုံးနှင့်အတူဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး counterbalanced ခဲ့သည်။
လေ့လာမှု 1 များအတွက်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့အာရုံ-ရှာကြံအလုပ်တခုကို၏တွက်ချက်မော်ဒယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေး (ရလဒ်များအရအိပ်ယာ vs haloperidol) ၏အတွင်း-ဘာသာရပ်များအချက်နှင့်အတူတစ်ဦးကထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ ANOVA နှင့် (ပထမဒုတိယစမ်းသပ်မှု session တစ်ခု vs) မူးယစ်ဆေးဝါးအမိန့်များအကြား-ဘာသာရပ်များအချက်စမ်းသပ် session ကိုဒေတာကနေ key ကိုမှီခို variable တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အထူးသညျဤပါဝင်သူ-စိတ်ပိုင်းဖြတ်လက်ရှိလွှဲခွင်, MES တန်ဖိုးကိုဖော်ပြမော်ဒယ် parameters တွေကို (θ) နှင့်ရွေးချယ်မှု stochasticity (β), ရွေးချယ်မှု RT ကိုဆိုလိုနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ RT ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှု (ပျမ်းမျှ RT ကိုခဲ့ကြသည်CS + - ပျမ်းမျှ RT ကိုCS-) ။ အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် Bonferroni ညှိနှိုင်းမှုနှင့်အတူ pairwise နှိုင်းယှဉ်မှတဆင့်ရှိပါတယ်ရိုးရှင်းသောသက်ရောက်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။
ယေဘုယျနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ၏ဆောင်ရွက်ချက်များ (vas, ARCI, LDST ရမှတ်များနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအစီအမံ) တွဲ-နမူနာကနေတဆင့်စမ်းသပ်အစည်းအဝေးများအကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် t စမ်းသပ်မှုများ။ တဦးတည်းပါဝင်သူတစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းစမ်းသပ် session များအတွက်တက်ရောက်ရန်နိုင်ခြင်းနှင့်မိမိဒေတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ထပ်ပါဝင်သူနှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်မှုအစည်းအဝေးများအပေါ်တာဝန်များ၏ဝယ်ယူအဆင့်တွင်သတ်မှတ်ထားအဆင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရောက်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း, ဒါကြောင့်မိမိအ data တွေကိုလည်း 28 ၏နောက်ဆုံးဎအလျှော့ပေးလိုက်လျော, ဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။
အားလုံးစာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း Matlab R19.0b (MathWorks, Inc, Sherborn, MA) တွင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့်ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, မှလွဲ. SPSS 2011 (IBM ကကော်ပိုရေးရှင်း, Armonk, နယူးယော့) တွင်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
အပြုအမူ Sensation-ရှာအံ့သောငှါအပေါ် Haloperidol ၏ baseline-မှီခိုအကျိုးသက်ရောက်မှု
လေ့လာမှု 1 ၏အဓိကတွေ့ရှိချက်သင်တန်းသားများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယနမူနာ (θတန်ဖိုးများနှင့်တစ်ဦးချင်း RT ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် Self-အစီရင်ခံအာရုံ-ရှာနှစ်ဦးစလုံးအကြားမျှော်လင့်ထားသည့်လမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာသိသိသာသာဆက်ဆံရေး) (ထံမှအခြေခံ session data တွေကိုပုံတူမဖြစ်တော့ဘူးခဲ့ကြသည်နောက်ဆက်တွဲပုံ 1) ။ အခြေခံများနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအစည်းအဝေးများအနေဖြင့်ဒေတာများအကြားတစ်ဦးကမာတိကာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလည်း (တွေ့မြင်တရားမျှတတဲ့-to-ကောင်းသောအစည်းအဝေးများဖြတ်ပြီးθတန်ဖိုးခန့်မှန်းခြေ၏ယုံကြည်စိတ်ချရညွှန်ပြ နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက်), တစ်ဦးကထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံဒီဇိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုမှုများ၏တရားဝင်မှု supporting ။
အဆိုပါ2စမ်းသပ်မှု (မူးယစ် / ရလဒ်များအရအိပ်ယာ) အစည်းအဝေးများအနေဖြင့်ဒေတာများထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အခါ, အလုံးစုံ, သင်တန်းသားများကိုထပ်စျေးမှာ-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှု (CS +) ကို ရွေးချယ်. သိသိသာသာပိုပြီးမကြာခဏတန်းတူမှတ်စမ်းသပ်မှုတွေထက်ပိုမိုမြင့်မားအချက်များအပေါ်နှင့်တန်းတူအပေါ်နှစ်ဦးစလုံးရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်မှာအနိမ့်အချက်များကိုစုံစမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအစည်းအဝေးများ (ရုံးတင်စစ်ဆေးအမျိုးအစားအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု; F 2,54= 138.54, ƞ p2= 0.837, P < .001; အားလုံး types များအကြားခြားနားချက် P<.001; ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်ဆိုလို (SD က±) ရှေးခယျြမှု haloperidol ပေါ်မှာ 0.806 ± 0.19, 0.398 ± 0.17 နှင့် 0.126 ± 0.13 စဉ် 0.744 ဤစမ်းသပ်မှုအမျိုးအစားများအဘို့, အသီးသီး 0.19, 0.399 ± 0.15 နှင့် 0.158 ± 0.15 ±ဖြစ်ခဲ့သည်။
လက်ရှိလွှဲခွင်ပေါ် haloperidol ကုသမှုမျှသိသာခြုံငုံသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်, အားလုံး (Non-MES-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှု vs MES များအတွက် MES မှတာဝန်ပေးအပ်တန်ဖိုး (θ), ရွေးချယ်မှု stochasticity (β), RT ကိုဆိုလို, ဒါမှမဟုတ်ဆွေမျိုး RT ကိုထောက်ပြ P> .1) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအမိန့် (ပထမနှင့်ဒုတိယစာမေးပွဲဖြေဆိုချိန်တွင်တက်ကြွစွာပြင်ဆင်မှု) သည်မှီခိုနေသောမည်သည့်အရာအတွက်မဆို - ဘာသာရပ်များအကြားသိသာထင်ရှားသောအချက်မဟုတ်ပါ။P> .1) နှင့်အလုံးစုံမူးယစ်ဆေး * မူးယစ်ဆေးဝါးအမိန့်အပြန်အလှန်မရှိ (P> .1) ။ ထို့ကြောင့်, sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ဖို့နောက်ဆက်တွဲဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးအမိန့်မော်ဒယ်ကနေစွန့်ပစ်ခဲ့သည်။
လေ့လာမှု 1 အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ Non-MES-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှု vs-ဆက်စပ် MES များအတွက် MES ၏ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းနှင့်ဆွေမျိုးရွေးချယ်မှု RT ကိုမှတာဝန်ပေးအပ်အချက်များတန်ဖိုးကိုသင်တန်းသားများအကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုး (ရလဒ်များအရအိပ်ယာအခြေအနေများအောက်တွင်ဒုတိယနမူနာပုံတူမဖြစ်တော့ဘူးခဲ့သည်r= -0.602, P=.001), ဒါပေမယ့် intriguingly မဟုတ်ဘဲ haloperidol အောက်မှာ (r= -0.199, P> .1) (ပုံ 4A).
ပြင်းထန်သောအာရုံခံဆွဖို့တာဝန်တန်ဖိုးအပေါ် haloperidol ၏ဆိုးကျိုးများ။ (A) ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်စက္ကန့်နမူနာများတွင်ပြင်းထန်သောအာရုံခံဆွ (ပျော့လျှပ်စစ်ဆွ [MES]) ကိုတာဝန်ပေးအပ်တန်ဖိုးသိသိသာသာဆွေမျိုးရွေးချယ်မှုတုံ့ပြန်မှုအချိန်နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည် (RT ကို) MES များအတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ် Non-MES-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှု vs (r= -0.602, P=.001), မဟုတ် haloperidol အောက်မှာ (P> .1; ဆုတ်ယုတ်ကိန်းအတွက်သိသိသာသာကျဆင်းခြင်း, P<.05) ။ dashed လိုင်းများ 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလဖော်ပြသည်။ (Bဘာသာရပ်များ () 8 ဆီသို့ဦးတည် speeded ဆွေမျိုး RTs ပြဎ = ချဉ်းကပ်နှင့် (ဆီသို့ဦးတည်နှေးကွေးဆွေမျိုး RTs ပြဎ = 20 ရှောင်သောသူတို့အသောသူတို့အား) သို့ရလဒ်များအရအိပ်ယာအောက်ရှိပြင်းထန်သောအာရုံခံဆွဘို့အခွင့်အလမ်းကိုခှဲဝေကြသည်မှန်လျှင်), သိသိသာသာအပြန်အလှန်ရှိခဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အာရုံ-ရှာကြံအုပ်စုတစ်စုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု (အကြားP<.01) ။ Haloperidol သာသာမန်အခြေအနေများ (High-အာရုံရှာဖွေနေသူ [HSS] အောက်တွင် MES-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုကိုဦးတည်ချဉ်းကပ်တုံ့ပြန်မှုပြတဲ့သူတွေကိုသင်တန်းသားများအတွက် MES မှပေးအပ်သောစီးပွားရေးတန်ဖိုးယုတ်လျော့; cf အနိမ့်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေနေသူ [LSS]) ။ မှားယွင်းနေသည်အရက်ဆိုင် SEM ကိုယ်စားပြုသည်။ **P=.01, NS P> .10, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ vs မူးယစ်ဆေးဝါး။ = = ၂၈ ။
တစ်ဦးက posthoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ haloperidol အောက်မှာဒီဆက်ဆံရေးသိသိသာသာကို attenuation (Fisher ကအမှန်ပင်ရှိကွောငျးကိုဖျောပွထားပါ r-to-Z ဆက်စပ်မှုကိန်းအတွက်လျော့နည်းဘို့ Pearson-Filon စမ်းသပ်အသွင်ပြောင်း; Z= -1.735, P=.041, 1-Tails; Raghunathan et al ။ , 1996) ။ ထို့ကြောင့် haloperidol ကုသပြင်းထန်သောအာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ဆွေမျိုး preference ကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူချဉ်းကပ်-ရှောင်ရှားခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖျက်ပယ်တို့အားထင်ရှားလေ၏။ အလားတူပင် Self-အစီရင်ခံအာရုံ-ရှာကြံရမှတ်သိသိသာသာများနှင့်ရွေးချယ်အပြုသဘော (ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ် MES တန်ဖိုး (θ) နဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းခံခဲ့ရပေမယ့်r= 0.391, P=.040; MES preference ကိုမသက်ဆိုင်သောအခြား UPPS Impulse subscale ရမှတ်များ, P> .1) ဤသည် haloperidol အောက်မှာမဟုတ်ခဲ့ (r= -0.127, P> .1; Steiger's Z မူးယစ်ဆေးဝါးအခွအေန = 2.25 အကြားဆက်စပ်မှုကိန်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်များအတွက် P=.024; Steiger, 1980).
တစ်ဦး D2-ergic မူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆိုးကျိုးများအခြေခံအာရုံ-ရှာကြံ (အပေါ်မူတည်ခြင်းအလိုငှါ, ငါတို့ယခင်လေ့လာရေးနှင့် တွဲဖက်. အထက်ပါတွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးNorbury et al ။ , 2013), အုပ်စုအဆင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်ဖုံးကွယ်ခဲ့ကြခြင်းအလိုငှါအခြေခံ - မှီခိုမူးယစ်ဆေးဝါးသက်ရောက်မှုများအတွက်စစ်ဆေးရန်နောက်ထပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကောက်ယူခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးအောက်ရှိ RT အကျိုးသက်ရောက်မှုကို attenuation မောင်းနှင်နေသောအရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်, သင်တန်းသားများကိုသူတို့အေးစက်ချဉ်းကပ် (RT + CS + vs CS- လှုံ့ဆော်မှု, ဆိုလိုသည်မှာတစ် ဦး ချင်းစီ RT ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှု <0, N = 8) ပြသခြင်းရှိမရှိနှင့်အညီအုပ်စုဖွဲ့ခဲ့ကြသည်ဖိနှိပ်မှု ( CS- လှုံ့ဆော်မှု vs CS + မှ RT ကိုနှေးကွေး, ရလဒ်များအရအိပ်ယာအခြေအနေများအောက်တွင်ပြင်းထန်သောအာရုံခံဆွဆီသို့ ဦး တည်သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဆိုလိုသည်မှာတစ် ဦး ချင်းစီ RT ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှု> 0, = = 20) ။
ဘယ်အချိန်မှာဒီချဉ်းကပ်မှုသို့မဟုတ်အာဆီယံကိုရှောင်ရှားတဲ့အကြား-ဘာသာရပ်များအချက်အဖြစ်မော်ဒယ်မှထည့်သွင်းခဲ့သည်, ထိုအရပ်၌မူးယစ်ဆေးကုသမှုနှင့်အဖွဲ့ကိုအကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန်အဆိုပါ MES မှတာဝန်ပေးအပ်တန်ဖိုးကိုအပေါ်ခဲ့သည် (θတန်ဖိုးကိုအပေါ်သိသာထင်ရှားသောမူးယစ်ဆေး * အုပ်စုတစ်စုအပြန်အလှန်; F 1,26= 10.64, ƞ p 2= 0.290, P=.003; βတန်ဖိုးကိုအပေါ်အပြန်အလှန် P> .1) ။ ရိုးရှင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် haloperidol နှင့် placebo vs ချဉ်းကပ်မှုအုပ်စုတွင် MES တန်ဖိုးသိသိသာသာကျဆင်းခြင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။F 1,26= 7.97, ƞ p2= 0.235, P=.009) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, အရှောင်ရှားအုပ်စု MES တန်ဖိုးကိုအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးအဘယ်သူမျှမသက်ရောက် (ရှိခဲ့P> .1) (ပုံ 4B) ။ ထို့ကြောင့် haloperidol ရွေးချယ်အခြေခံအခြေအနေများအောက်၌ပြင်းထန်သောအာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုကိုဦးတည်ချဉ်းကပ်အပြုအမူပြတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် MES တန်ဖိုးကို attenuate တို့အားထင်ရှားလေ၏။
အုပျစုအသက်, အလေးချိန်, ခန့်မှန်းခြေအိုင်ကျူ, ဒါမှမဟုတ် Self-စိတ်ပိုင်းဖြတ်လက်ရှိပြင်းထန်မှု (လွတ်လပ်သောနမူနာများတွင်ကွာခြားခဲ့ပါဘူးချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှား t စမ်းသပ်မှုများအပေါင်းတို့, P> .1), သို့သော် UPPS အာရုံခံစားမှု - ရှာကြံရမှတ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားခဲ့ (t 26= 2.261, P=.032 သည်ချဉ်းကပ်အုပ်စုတွင်သိသာထင်ရှားစွာပိုမိုမြင့်မားယုတ်ရမှတ်; 40.9 ± 8.1 vs 32.9 ± 8.5) ။ အလားတူပင် 1 လေ့လာရန်, လွတ်လပ်သော-နမူနာပျမ်းမျှစမ်းသပ်မှုချဉ်းကပ်အုပ်စုတွင်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ရှောင်ပါအုပ်စုတစ်စု (Fisher ကန့်ထက်တစ်ပတ်ကိုသိသိသာသာပိုပြီးစီးကရက်သောက်သည်ကြောင်းထင်ရှား P=.022) နှင့် သာ. ကြီးမြတ်အပတ်စဉ်အရက်သောက်ဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ nonsignificant လမ်းကြောင်းသစ်ပြသ (P=.096; 20 ± 25 vs ရက်သတ္တပတ် 3.9 ± 13 နှုန်းစီးကရက်ကိုဆိုလိုတာ; တစ်ပတ်ကိုအချိုရည် 12 ± 13 vs 3.5 ± 3.9) ကိုဆိုလိုတာ။
အဆိုပါθတန်ဖိုး (မူးယစ်ဆေးနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအစည်းအဝေးများအကြားတန်ဖိုးခြားနားချက်) ရက်နေ့တွင် haloperidol ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအသက်အရွယ်မသက်ဆိုင်သောခဲ့အလေးချိန်, ခန့်မှန်းခြေအိုင်ကျူ, ခြုံငုံစိတ်ဓါတ်များသို့မဟုတ်ရွှင်လန်း vas ratings အပေါ်မူးယစ်ဆေးအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ARCI များ၏သက်သာခြင်းသို့မဟုတ် dysphoria အကြေးခွံပေါ်မူးယစ်ဆေးအကျိုးသက်ရောက်မှု, ဒါမှမဟုတ် အားလုံး; ယေဘုယျ psychomotor function ကို (LDST ရမှတ်အပေါ်မူးယစ်ဆေးအကျိုးသက်ရောက်မှု P> .1) ။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်တန်ဖိုးအားသုံးသောအရက်ယမကာများသို့မဟုတ်ပျမ်းမျှသီတင်းပတ်အတွင်းစီးကရက်သောက်သောဆေးများအကြားသိသာသောဆက်နွယ်မှုမရှိပါ (Spearman's 0.25 <XNUMX, P> .1) ။ / မရှိသူ / ဘာသာရပ်များ (n = 10 vs n = 18) (စားပွဲတင် 1) ကိုပြီးခဲ့သည့် 12 လအတွင်းအရက်သို့မဟုတ်ဆေးရွက်ကြီးထက်အခြားမည်သည့်အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်စေ့စပ် (လွတ်လပ်သောနမူနာθတန်ဖိုးကိုအပေါ် haloperidol ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ကွဲပြားဘူး t စမ်းသပ်မှု, P> .1) ။
ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့် General Psychomotor မူးယစ်ဆေးအကျိုးသက်ရောက်မှု
အထက်ပါတွေ့ရှိချက်များမူးယစ်ဆေးကုသမှုယေဘုယျသက်ရောက်မှုများကရှင်းပြခဲ့လို့မရပါ။ ယေဘုယျအလားအလာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုး (16 အကြေး, ရှိသမျှအဲဒီမှာခံစားချက်၏ vas ratings အပေါ် haloperidol မရှိသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှု, အကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့ကြခြင်းသို့မဟုတ် P> .1) (အသေးစိတ်ကိုကြည့်ရန်) နောက်ဆက်တွဲဇယား 1) ။ အားလုံးဆို ARCI subscale ရမှတ် (MBG Euphoria ပီတိ, PCAG သက်သာခြင်း, LSD dysphoric နှင့် psychotomimetic သက်ရောက်မှု, BG နှင့် A လှုံ့ဆော်ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများအကြေးခွံပေါ်တွင် haloperidol မရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းရှိခဲ့သည် P> .1) သို့မဟုတ်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအစီအမံများ (သွေးပေါင်ချိန်နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်း၊ P> .1) ။ ပါဝင်သူများ၏သတ်မှတ်ချက်အပေါ်တွင်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့သည်မူးယစ်ဆေး (သို့) ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်တက်ခြင်းအပေါ်ယုံကြည်မှုရှိမရှိအပေါ်တွင်ဆေးကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။P> .1) ။ နောက်ဆုံးတွင် haloperidol ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာယေဘုယျစိတ်နှင့်ဆိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုအပေါ် LDST စွမ်းဆောင်ချက်များမှညွှန်းဆိုထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည် (P> .1) ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ haloperidol များ၏လေ့လာတွေ့ရှိသက်ရောက်မှုကြောင့်မူးယစ်ဆေးနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအစည်းအဝေးများအကြားသင်ယူခြင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သောအယူအဆဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ (task ကို၏ပထမအဆင့်တွင်သတ်မှတ်ထားစွမ်းဆောင်ရည်ရောက်ရှိရန်လိုအပ်စမ်းသပ်မှုတွေအရေအတွက်အပေါ် haloperidol မရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့P> .1) ။ ပါဝင်သူများ၏ CS + နှင့် CS- လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်“ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သောအသိပညာ” အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ (VAS အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှရနိုင်သောအခွင့်အလမ်း [+300] မှအထိတ်တလန့်မဖြစ်နိုင်သည့်အထိ - ၃၀၀]) ကိုထပ်မံတိုင်းတာသည့်ပုံစံအတွင်း၌ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ CS type (CS + vs CS-) သည်အဓိကအားဖြင့် CS type (F) ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြသည်။1,27= 74.56, ƞ p 2= 0.734, P<.001; () CS- လှုံ့ဆော်မှု -146 ± 18.2 ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုဆိုလိုတာ, CS + လှုံ့ဆော်မှု 150 ± 19.1 ၏ [± SEM] rating ဆိုလိုပေမယ့်မူးယစ်ဆေးကုသမှုမျှအကျိုးသက်ရောက်မှုP> .1) သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါး * CS အမျိုးအစားအပြန်အလှန် (P> .1) MES အသင်း၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအသိပညာအပေါ်။ ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ကြဉ်သောအုပ်စုအားမော်ဒယ်လ်တွင်အကြား - ဘာသာရပ်များအကြားအချက်အဖြစ်ထည့်သွင်းသောအခါမူးယစ်ဆေးဝါး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတွင်အုပ်စုများအကြားထိတ်လန့်ဗဟုသုတအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်စု *၊ P> .1) သို့မဟုတ် CS အမျိုးအစား (မူးယစ်ဆေး * CS အမျိုးအစား * အုပ်စု) ပေါ် မူတည်၍ မူးယစ်ဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ P=.09) ။
ကျနော်တို့အနေနဲ့ပြင်းထန်သောအာရုံခံလှုံ့ဆော်မှု (MES) တွေ့ကြုံခံစားရန်အခွင့်အလမ်းကိုအာရုံ-ရှာကြံ၏ဤအမူအကျင့်အညွှန်းကိန်းဟာ D2 dopamine အဲဒီ receptor ရန် haloperidol ကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ပုံ, နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးရိုးရှင်းတဲ့စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဝန်စဉ်အတွင်းအပြုအမူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်မည်ကဲ့သို့ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အခွင့်အလမ်းအထက်ပြင်းထန်သောထိတွေ့နိုင်သောဆွနဲ့ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှု၏ရွေးချယ်မှုကဒီရွေးချယ်မှုကိုငွေကြေးအမြတ်၏ယဇျပူဇျောပါဝင်ပတ်သက်လျှင်ပင်အချို့သင်တန်းသားများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်အဆိုပါပြင်းထန်သောအာရုံခံဆွကဤတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အစာစားချင်စိတ်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားထားကြောင်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဒီအနက်ကိုထောက်ခံကြောင်း, MES-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှု၏ကြီးမြတ်သောအချိုးအစားကို ရွေးချယ်. တဲ့သူသင်တန်းသားများကိုအဆင့်မြင့် Self-အစီရင်ခံအာရုံ-ရှာကြံရမှတ်ခဲ့ရှုပ်ထွေး၏နိဒါန်းတွင်အောက်ပါသည်ဤလှုံ့ဆော်မှုများ၏သူတို့၏ "အကြိုက်" ratings တိုးလာနှင့်တစ်ဦးအပြုသဘောစီးပွားရေးတန်ဖိုးတာဝန်ပေး အလုပ်တခုကိုစွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုကောင်းမွန်စွာလျောက်ပတ်ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်အတွက်အပိုဆောင်းအာရုံခံဆွလက်ခံရရှိရန်အခွင့်အလမ်း။
အရေးကြီးတာက, အ MES သင်တန်းသားများကိုစိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှုခဲ့သောအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီသည့်ပြင်းထန်သောအာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ရှေးခယျြမှု RTs များအတွက်ဦးစားပေးအကြားအလွန်အရေးပါသောဆက်ဆံရေးမျိုးရှိ၏။ ဤအလှုံ့ဆော်မှုရွေးချယ်တဲ့အခါနှစ်ခုလုံးကိုနမူနာများတွင် MES-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှု၏ကြီးမြတ်သောအချိုးအစားကို ရွေးချယ်. သူကသင်တန်းသားများကိုသူတို့ကိုရှောင်ရှားရန်တော်မှာသူတွေကိုလေ့လာဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့, သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဆွေမျိုးအရှိန်ပြသခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီကိုယေဘုယျအားစာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်တုံ့ပြန်မှုကြိမ် speeded ဒါပေမယ့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (ချဉ်းကပ်ရန်နှေးကွေးဖြစ်ကြောင်းပြသသောယခင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် တွဲဖက်.Crockett et al ။ , 2009; Wright et al ။ , 2012), ဒီပြင်းထန်သောအာရုံခံဆွဘို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုချဉ်းကပ်-ရှောင်ရှားခြင်းကဲ့သို့သောယန္တရားကနေတဆင့်သင်တန်းသားများကို '' ရွေးချယ်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ပြင်းထန်စွာ, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုဟာ D2 အဲဒီ receptor ရန်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာထင်ရှားမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒီအပြတဲ့သူသင်တန်းသားများကိုအတွက်ပြင်းထန်သောအာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုများလက်ခံရရှိမှုမှပေးအပ်သောစီးပွားရေးတန်ဖိုးအတွက်ရွေးချယ်ကျဆင်းခြင်းကြောင့်ဆီသို့ (သို့မဟုတ်ချဉ်းကပ်တုံ့ပြန်မှုမှပြသ) ရလဒ်များအရအိပ်ယာအခြေအနေများ (အမူအကျင့်က high-အာရုံရှာဖွေနေသူ) အောက်ရှိ MES ဆွေမျိုး RTs လျော့နည်းသွားခဲ့သည်။
ဤနေရာတွင်တင်ပြရလဒ် (အထူးသဖြင့် striatal ဒေသများအတွက် dopaminergic neurotransmission အတွက်အပြောင်းအလဲမှရိုအာရုံ-ရှာကြံပြောပြတယ်ကြောင်းနှစ်ဦးစလုံးသည်လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်အနေဖြင့်အထောက်အထားများကျယ်ပြန့်နောက်ခံနှင့်အညီဖြစ်ကြောင်းHamidovic et al ။ , 2009; Olsen နှင့် Winder, 2009; ရှင် et al ။ , 2010; Gjedde et al ။ , 2010; Norbury et al ။ , 2013) ။ မျိုးဗီဇများနှင့်ပေ radioligand ရွှေ့ပြောင်းခံရလေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထားများတစ်ဦးကပေါင်းစပ် (အာရုံ-ရှာကြံကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတွက်တစ်ဦးချင်းစီပိုမိုမြင့်မားနှစ်ဦးစလုံးပိုမိုမြင့်မား endogenous dopamine အဆင့်ဆင့်ရှိသည်နှင့်၎င်း striatum အတွက်လာမည့်ဆုလာဘ်၏တွေကိုပိုမို dopaminergic တုံ့ပြန်မှုစေခြင်းငှါအကြံပြုRiccardi et al ။ , 2006; Gjedde et al ။ , 2010; O'Sullivan et al ။ , 2011) ။ striatal function ကို (အတွင်း dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို၏တဦးတည်းသြဇာမော်ဒယ်အဆိုအရဖရန့်, 2005), ပုံမှန်ပြည်နယ်၌ဤ inhibitory postsynaptic D2 receptors ၏တိုးလာဆွကနေတဆင့် "NoGo" (action ကိုတားစီး) လမ်းကြောင်းအာရုံခံ၏တိုးမြှင့်တားစီးဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ဒီအလှည့်ကျကွီးမွတျခြုံငုံ thalamic disinhibition မှုမယ်လို့သို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်ဆုလာဘ်တွေကိုထံ၌, High-အာရုံရှာဖွေသူများအတွက်ဘက်လိုက်မှု (မျက်နှာသာအရေးယူစကားရပ်) "Go" ။
Haloperidol D2 receptors ကနေတဆင့်ပြနေတဲ့အသံတိတ် D2 အဲဒီ receptor ရန် (လုပ်ကွက် endogenous dopamine ဖြစ်၏ Cosi et al ။ , 2006), နှင့် D2 ရန်ယခင်က (ဦးစား striatal function ကိုထိခိုက်စေပြခဲ့ကြKuroki et al ။ , 1999; ပျားရည် et al ။ , 2003) ။ ထို့ကြောင့်, haloperidol အောက်မှာပိုမိုမြင့်မားအာရုံရှာဖွေနေသူများတုံ့ပြန်မှုတိုးလာ NoGo လမ်းကြောင်း output ကိုခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် (အာရုံရှာဖွေသူများကိုလျှော့ချဖို့အကြံအစည်အတွက်တိုး) ပုံမှန်စေခြင်းငှါ။ ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ဤအမြင့်မားတဲ့အာရုံခံစားမှု-ရှာကြံ (ချဉ်းကပ်အုပ်စုသည်) တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပြင်းထန်သောအာရုံခံဆွဖို့အစာစားချင်စိတ်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ရွေးချယ်ကျဆင်းခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကိုရှင်းပြလိမ့်မယ်။
ရွေးချယ်မှုအပေါ် haloperidol ၏သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်, သင်ယူမှုအပေါ်မည်သည့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမရှိခြင်းအတွက်, (နဂိုအတိုင်းသင်ယူခြင်းထွက်ခွာနေချိန်တွင် D2 ရန်ကြိုး-ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှု၏ရွေးချယ်မှုအပေါ်ခိုင်မာတဲ့သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်းမကြာသေးမီအလုပ်နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်Eisenegger et al ။ , 2014) ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ (အထကျအကြံပြု putative ယန္တရား haloperidol တစ်အများစု postsynaptic အကျိုးသက်ရောက်မှုယူဆသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်ဖရန့်နှင့် O'Reilly, 2006) ။ ယခင်က (ရောထွေးအကျူးများနှင့် postsynaptic D2-ergic သက်ရောက်မှုလေ့လာတွေ့ရှိခံရဖို့ထင်ရာ) လေ့လာမှုကိုးကားထက်ကျနော်တို့ဒီမျှတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားပေးနိုငျကြီးမြတ်သောထိုးအသုံးပြုခြင်းဖြင့် binding သိသိသာသာ postsynaptic အဲဒီ receptor ကိုသေချာစေရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုနေသော်လည်း။ နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဦးနှောက်ဒေသများနှင့် ပတ်သက်. အခြမှန်းဆဖြစ်ကြပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာအားဖြင့်, နောက်ထပ်အလုပ်အတွက်စမ်းသပ်ပြီးခံရဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။
ဤနေရာတွင်တင်ပြအဆိုပါလေ့လာမှုများအချို့န့်အသတ်ရှိသည်။ အစစ်အမှန်ကမ်ဘာပျေါတှငျအာရုံ-ရှာကြံအပြုအမူတွေအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုယူနိုင်ပါသည်အဖြစ်ပထမဦးစွာပြုလုပ်တစ်ခုတည်း, ထိတွေ့နိုင်သောအာရုံခံလှုံ့ဆော်မှု (MES) ၏အသုံးပြုမှုကိုလုံလုံလောက်လောက်အားလုံးတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အာရုံခံစားမှု-ရှာကြံအပြုအမူကိုဖမ်းယူနိုင်ကြောင်းအံ့သြစရာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ယခင်လေ့လာမှုအနိမ့်နှင့်မြင့်မားသော Self-အစီရင်ခံအာရုံ-ရှာဖွေနေသူ (အတွင်းလျှပ်စစ်ရှော့ခ်မှကွဲပြားဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှု profile များကိုသတင်းပို့နှင့်ကိုက်ညီများမှာde Pascalis et al ။ , 2007) ။ ငါတို့သည်ဤရှုပ်ထွေးပြီး multidimensional ရိုဖြစ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်အပေါ်ကြောင်းစွမ်းဆောင်ရည်, အာရုံခံစားမှု-ရှာကြံကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအပေါငျးတို့သဖမ်းယူတောင်းဆိုဖို့မရှာပေမယ့် High-အာရုံ-ရှာကြံတစ်ဦးချင်းစီ၏အနည်းဆုံးအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်အတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်အာရုံ-ရှာကဲ့သို့သောအပြုအမူကိုအသာပုတ်စေခြင်းငှါ , အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို (pharmacological ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်အတူဥပမာ) ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်နောက်ခံအာရုံကြောယန္တရားများစုံစမ်းခွင့်ပြု။ အလားတူဖက်ရှင်များတွင်အာရုံ-ရှာကြံအပြုအမူ၏ပုံထပ်တူထပ်မျှတိရိစ္ဆာန်စစ်ဆင်ရေး, ဥပမာ (အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထပ်အာရုံကြော circuitry ကိုထိပုတ်ပါစေခြင်းငှါအချို့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် Parkitna et al ။ , 2013).
အရေးကြီးသည်မှာနှစ်ဦးစလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတွေအတွက် MES-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှု၏ရှေးခယျြမှုအာရုံ-ရှာ-type အမျိုးအစားအပြုအမူတွေ၏မျိုးစုံအတန်းစုံစမ်းထားတဲ့စုစုပေါင်း Self-အစီရင်ခံအာရုံ-ရှာကြံရမှတ်များနှင့်အတူရွေးချယ်ပတျသကျမှရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဤအဆက်ဆံရေးသာအလယ်အလတ်အစွမ်းသတ္တိ၏ခဲ့ကြသည်သော်လည်း (ဤတွေ့ရှိချက်မြား၏အကွာအဝေး၏မြင့်မားအဆုံးမှာယေဘုယျအားဖြင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူများ၏အမူအကျင့်များနှင့်မေးခွန်းလွှာအစီအမံများအကြားတွေ့သမျှသောမှတ်သားရပါမည်Helmers et al ။ , 1995; မစ်ချယ်, 1999) ။ ကျနော်တို့လည်းတာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်အာရုံ-ရှာကြံအပြုအမူတွေအတွက်အစစ်အမှန်ဘဝထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆက်စပ်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုညွှန်းသည် MES တွေ့ကြုံခံစားရန်အခွင့်အလမ်းကိုဦးတည်နေတဲ့အပြုသဘောတန်ဖိုးကိုတာဝန်ပေးသူကိုတစ်ဦးချင်းစီအကြား သာ. ကြီးမြတ်အပန်းဖြေပစ္စည်းဥစ္စာစားသုံးမှုအချို့သက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဒုတိယအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏မူးယစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တဦးတည်း (ယခင်ကပိုမိုမြင့်မားယုတ်တန်ဖိုး) အတွက်တန်ဖိုးသိသိသာသာကျဆင်းခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်အဖြစ်အဖွဲ့ခွဲ, လေ့လာ2ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာရှင်းပြချက်ဒီရိုးရှင်းစွာယုတ်အကျိုးသက်ရောက်ရန်ဆုတ်ယုတ်ကိုကိုယ်စားပြုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သို့သော်ဤအနက်ကိုဆန့်ကျင်, ကျနော်တို့ (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝတ္ထုပါရာဒိုင်း၏မျိုးစုံအစည်းအဝေးများဖြတ်ပြီးအတူတူသင်တန်းသားများအနေဖြင့်ထုတ်ပေးθတန်ဖိုးမျှတ-to-ကောင်းသောယုံကြည်စိတ်ချရ၏သက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိရနောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက်).
(ထို2သိသိသာသာဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြတယ်ပေမယ့်) ထို့ပွငျလေ့လာမှု2များအတွက်လူမျိုးကွဲနှုန်း se ဆွေမျိုးရွေးချယ်မှု RTs အတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်ထက်θတန်ဖိုးများအပေါ်တွင်အခြေခံထားပါသည်။ ငါတို့သည်လည်း, အုပ်စုတစ်စုသင်တန်းသားများကိုဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယစမ်းသပ်ခြင်း session တစ်ခု (ရလဒ်များအရအိပ်ယာ session တစ်ခု) မှယခင်ကယုတ်သက်ရောက်မှု (မှဆုတ်ယုတ်ဆန့်ကျင်ကိုယ်ရံတော်ကိုကူညီစောဒကတက်ထားပြီးတဲ့မဟာဗြူဟာ RT ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန့်မှန်းချက်ကိုအသုံးပြုဘား et al ။ , 2005) ။ အတူတူယူကျနော်တို့ကဤအချက်များသည့်ချဉ်းကပ်မှုသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအာရုံခံစားမှု-ရှာကြံတစ်ဦးချင်းစီအတွက် MES တန်ဖိုးကိုအပေါ် haloperidol တစ်ဦးသက်သက်သာသေးအဖွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုဆန့်ကျင်ငြင်းခုန်ကြောင်းဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလိမ့်မည်။
တတိယအချက်အနေဖြင့် haloperidol ကို D2 receptor antagonist ဟုသတ်မှတ်သည် (၎င်းသည်ကြွက်နှင့်လူ့ကိုယ်ပွားဆဲလ်များရှိ D15 receptor များထက် D2 နှင့်> ၁၅ ဆပိုမိုအားစိုက်သည်။ Arnt နှင့် Skarsfeldt, 1998), ဒါကြောင့်လည်းအဘို့ကျိုးနွံဆှဖှေဲ့ရှိသည်ဖို့ပြသထားသည် αpostmortem လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ -1 adrenoreceptor နှင့် serotonin 2A အဲဒီ receptor (Richelson နှင့် Souder, 2000) ။ ထို့ကြောင့်, ငါတို့သည်ငါတို့၏မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများအခြေခံသည့်ယန္တရားနှင့် ပတ်သက်. လုံးဝအချို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ haloperidol ယခင်က 2mg မှာ 60mg နှင့် 70-3% မှာအတော်လေးနိမ့်ပါးစပ်ဆေးများ (53-74% မှာဦးနှောက် D2 အဲဒီ receptor ထေို၏မြင့်မားသွေးဆောင်သတင်းပို့ခဲ့ပြီးသကဲ့သို့၎င်း, Nordstrom et al ။ , 1992; Kapur et al ။ , 1997), ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု (2.5mg) တွင်အသုံးပြုသောဆေးထိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းသားများအတွက်ဗဟို D2 receptors ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုမှလုံလောက်ခဲ့ပါတယ်ယုံကြည်ကြသည်။ နောက်ထပ်အလားအလာရှိသောန့်အသတ်ကျနော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိသည့်အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ haloperidol ကုသမှုအချို့ကိုယေဘုယျအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေဥပမာ, တိုးမြှင့်အနုတ်လက္ခဏာအချို့သင်တန်းသားများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။ သို့သော် MES တန်ဖိုးကိုအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစိတ်ဓါတ်များ, အကျိုးသက်ရောက်စေ, သက်သာခြင်းသို့မဟုတ် dysphoria ratings အတွက်ကွဲပြားမှု, ဒါမှမဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအစည်းအဝေးများအကြားယေဘုယျ psychomotor function ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းအတာမသက်ဆိုင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ဒီမှာမိတ်ဆက်ဝတ္ထုပါရာဒိုင်းအတူတကွယှဉ်တွဲဆက်စပ်နေတဲ့အပြုအမူညျခှနျအားအတူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြင်းထန်သောနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအာရုံခံဆွဖို့စိတ်အားထက်သန်တဲ့အတိုင်းအတာထိရန်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ချဉ်းကပ်ထက်ဆွဒီလိုမျိုးရှောင်ရှားရန်ရှေးခယျြသူသင်တန်းသားများကို, ကြှနျုပျတို့ကတိရိစ္ဆာန်စာပေထံမှအလားတူတွေ့ရှိချက်များကိုဆင်တူ, ပင်ကိုစရိုက်ကကြိုးများနှင့်ကြောင်းကြောင်းအဆိုပြု, ဒီစာစားချင်စိတ်ကိုတုန့်ပြန်သည့် D2 အဲဒီ receptor dopamine စနစ်ကပါဝငျသညျ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ပိုပြီးအစွန်းရောက်အာရုံ-ရှာကြံရမှတ်တစ်ဦးအားနည်းချက်အချက်ဖွဲ့စည်းပေးသောအဘို့အထူးထူးအပြားပြား psychopathologies ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကူညီလိမ့်မည်။
JPR ကင်းဘရစ်သိမှတ်ခံစားမှုတစ်ခုအကြံပေးသည်နှင့် Lundbeck များအတွက်မီဒီယာအကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ထဲမှာ paid စပီကာအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သိရသည်။ အားလုံးသည်အခြားစာရေးဆရာများထုတ်ဖော်ရန်မဘဏ္ဍာရေးအကျိုးစီးပွားရှိသည်။
ဤလုပ်ငန်းကိုအဆိုပါ Wellcome Trust မှ (MH မှဆုချီးမြှင့် 098282) နှင့်ဗြိတိန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီကထောက်ခံခဲ့သည်။
အဆိုပါအာဘော် 2015 ©။ CINP ကိုယ်စား Oxford တက္ကသိုလ်မှ Press ကထုတ်ဝေသည်။
ဤသည်ကို (ကို Creative Commons Attribution လိုင်စင်၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြန့်ဝေထားတဲ့ Open ကို Access ကိုဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), တားမြစ်ခြင်းမရှိသောပြန်သုံး, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, မည်သည့်အလတ်စားအတွက်မျိုးပွားခွင့်ပြုထားတဲ့, မူရင်းလက်ရာစနစ်တကျကိုးကားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်သည်။
Arnt J ကို
Skarsfeldt T က
(1998) ဝတ္ထု antipsychotics အလားတူ pharmacological ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါသလား? အထောက်အထားတစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်။ Neuropsychopharmacology 18: 63- 101 ။
(1994) Sensation ရှာ, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ကုသမှု-ရှာနှင့်ရပ်ရွာကိုကင်းချိုးဖောက် psychopathology ။ J ကိုတိုင်ပင်ပါ 62: 1053- 1057 ။
အသစ်အဆန်းရှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေလျက်အပြုအမူများ (1996) Psychobiology ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 77: 23- 43 ။
ဘား AG က
Pols JC ပါ
ဗန် der, Dobson AJ
ယုတ်ဖို့ (2005) Regression: အဘယျသို့ကဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်။ int J ကို Epidemiol 34: 215- 220 ။
Blanchard ဖြစ်ပြီး MM
(2009) The HR / LR မော်ဒယ်: အာရုံရှာ၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အဖြစ်နောက်ထပ်သက်သေသာဓက။ neuroscience Biobehav ဗြာ 33: 1145- 1154 ။
ကျန်းမာ, လူထုအသကျရှငျယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက် (1985) Co-ဖြစ်ပျက်မှုစီးကရက်၏အသုံးပြုမှုကို, အရက်နှင့်ကော်ဖီ။ ကနျြးမာရေး Psychol 4: 323- 335 ။
Cosi ကို C
Carilla-Durand E ကို
ကို MB Assié
Maraval M က
Leduc N ကို
Newman က-Tancredi တစ်ဦးက
dopamine D2006 receptors မှာ antipsychotics SSR181507, aripiprazole နှင့် bifeprunox ၏ (2) တစိတ်တပိုင်း agonist ဂုဏ်သတ္တိများ:, G ပရိုတင်းကို Activation နှင့် prolactin လွှတ်ပေးရန်။ EUR J ကို Pharmacol 535: 135- 144 ။
(2009) အပြုအမူဆိုင်ရာတားစီးနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်အတွက် serotonin ၏အခန်းကဏ္ဍကိုပွနျလညျသငျ့မွ: စူးရှ tryptophan လျော့ကျလူသားတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်-သွေးဆောင်တားစီး abolishes ။ J ကို neuroscience 29: 11993- 11999 ။
de Pascalis V ကို
Valerio E ကို
Santoro က M
(2007) Neuroticism-စိုးရိမ်စိတ်, ထကြွလွယ်သော-အာရုံရှာခြင်းနှင့် somatosensory လှုံ့ဆော်မှုမှကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှု။ int J ကို Psychophysiol 63: 16- 24 ။
Eisenegger ကို C
Naef M က
လူ့အားဖြည့်သင်ယူမှုအတွက် dopamine D2014 receptors ၏ (2) အခန်းက္ပ။ Neuropsychopharmacology 39: 2366- 2375 ။
အဆိုပါ Basal ganglia အတွက် (2005) Dynamic dopamine မော်ဂျူ: Medical နှင့် nonmedicated Parkinson အတွက်သိမြင်မှုလိုငွေပြမှု၏ neurocomputational အကောင့်။ J ကို Cogn neuroscience 17: 51- 72 ။
လူ့သိမှတ်ခံစားမှုထဲမှာ striatal dopamine function ကို၏ (2006) တစ်ဦးက mechanistic အကောင့်: cabergoline နှင့် haloperidol နှင့်အတူ psychopharmacological လေ့လာမှုများ။ ပြုမူနေ neuroscience 120: 497- 517 ။
Kumakura Y ကို
Linnet J ကို
striatum နှင့်အာရုံခံစားမှုရှာထဲမှာ dopamine အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအကြား (2010) Inverted-U-shaped ဆက်စပ်မှု။ proc Natl Acad သိပ္ပံ 107: 3870- 3875 ။
(2007) တစ်ဦးကိုဗြိတိန်နမူနာအတွက်စကေးရှာအာရုံ၏ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တရားဝင်မှု၏တစ်ဦးကအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Individ ကွဲပြားခြားနားသော 42: 641- 651 ။
Palmer က AA ကို
က de ကျေး H ကို
ကျန်းမာသင်တန်းသားများအတွက် D-စိတ်ကြွဆေးနဲ့ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု: အပြုအမူတားစီးနှင့် Impulse / အာရုံခံစားမှုရှာ ဆက်စပ်. အတွက် dopamine အဲဒီ receptor D2009 အတွက်မျိုးဗီဇပြောင်းလဲနိုင်သည်၏ (2) အကဲဖြတ်။ Exp Clin Psychopharmacol 17: 374- 383 ။
ကျန်းမာအထီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် Impulse ၏အတိုင်းအတာများ (1995) အကဲဖြတ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Individ ကွဲပြားခြားနားသော 19: 927- 935 ။
နို့စို့ J ကို
Zelaya က F
Routledge ကို C
Ng သည် V ကို
Williams က SCR
ဘရောင်း J ကို
လူသားတစ်ဦး cortico-striato-thalamic စနစ်ဇီဝကမ္မဆက်သွယ်မှုအပေါ် (2003) Dopaminergic မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက်ကို 126: 1767- 1781 ။
Ikemoto S က
(2007) Dopamine ဆုလာဘ် circuitry: အနျူကလိယဖို့ ventral midbrain ကနေနှစ်ခု projection စနစ်များ accumbens-olfactory tubercle ရှုပ်ထွေး။ ဦးနှောက် Res ဗြာ 56: 27- 78 ။
Jupp B ကို
မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ (2014) အပြုအမူ endophenotypes: neuroimaging လေ့လာမှုများကနေ etiological ထိုးထွင်းသိမြင်။ Neuropharmacology 76, Part B: 487- 497 ။
Kapur S က
Zipursky R ကို
ရွိုင်း P ကို
ရိဒ် K သည်
Houle S က
(1997) အနိမ့်ထိုးပါးစပ် haloperidol အပေါ် D2 အဲဒီ receptor ထေိုနှင့်ပလာစမာအဆင့်ဆင့်အကြားဆက်ဆံရေး: တစ်ပေလေ့လာမှု။ Psychopharmacology (Berl) 131: 148- 152 ။
Kosterman R ကို
Hawkins က JD
မှုတွင်အဘို့သက်သေသာဓကနှင့်အရို-Level အသင်းအဖွဲ့များ: ထွန်းသစ်စလူကြီးကိုဖြတ်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု (2012) Co-ဖြစ်ပျက်မှု။ စှဲမွဲမှု 107: 1288- 1296 ။
Heath AC အ
(1995) အာရုံခံစားမှုရှာ၏တစ်ဦးက multivariate မျိုးရိုးဗီဇခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ပြုမူနေမျိုးရိုးဗီဇ 25: 349- 356 ။
Kuroki T က
Ichikawa J ကို
ကြွက် medial prefrontal cortex နဲ့နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်အပေါ် antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါး (1999) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို Pharmacol Exp Ther 288: 774- 781 ။
Lackner N ကို
Neubauer AC အ
ယင်းကုထုံးအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကုသမှုများအတွက်ဂယက်: အရက်နှင့် polydrug အလွဲသုံးစားပြုသူများအကြားကြီးမားသောငါးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များအတွက် (2013) ကွာခြားချက်များ။ int J ကို Ment ကနျြးမာရေးစွဲ 11: 682- 692 ။
Liem-Moolenaar M က
Visser SJ က de
Schmitt J ကိုတစ်ဦး။ J ကို
Cohen ကို AF
ဗန် Gerven JMA
(2010) Psychomotor နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာသို့မဟုတ် haloperidol နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် talnetant ၏တစ်ခုတည်းပါးစပ်ထိုး (SB223412) ၏သိမြင်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ J ကို Psychopharmacol (Oxf) 24: 73- 82 ။
(1971) ဇီဝကမ္မ, ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်စိတ်ကြွဆေး, စိတ်ကြွဆေး, ephedrine, phenmetrazine နှင့်လူ methylphenidate ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ Clin Pharmacol Ther 12: 245- 258 ။
haloperidol နှင့်လျှော့ချ haloperidol ၏ pharmacokinetics အတွက် (1989) Intersubject မူကွဲ။ J ကို Clin Psychopharmacol 9: 98- 104 ။
Mitchell က SH
စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် Non-ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် Impulse ၏ (1999) ဆောင်ရွက်ချက်များ။ Psychopharmacology (Berl) 146: 455- 464 ။
Manohar S က
Husain M က
(2013) Dopamine အခြေခံအာရုံ-ရှာကြံရို၏ function ကိုအဖြစ်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ modulates ။ J ကို neuroscience 33: 12982- 12986 ။
Farde L ကို
Halldin ကို C
haloperidol ၏တစ်ခုတည်းပါးစပ်ဆေးများပြီးနောက်ပေအားဖြင့်ဆန်းစစ် D1992-dopamine အဲဒီ receptor ထေို၏ (2) အချိန်သင်တန်း။ Psychopharmacology (Berl) 106: 433- 438 ။
(2009) အော်ပရေတာအာရုံရှာ C57 ကြွက်တွေအတွက်ရှာကြံအော်ပရေတာမူးယစ်ဆေးဆင်တူအာရုံကြောအလွှာပါဝင်နေသည်။ Neuropsychopharmacology 34: 1685- 1694 ။
ဝူ K သည်
Politis M က
ဘို့စ် SK ကို
Piccini P ကို
ပါကင်ဆန်ရောဂါ-ဆက်စပ်ထကြွလွယ်သော-compulsive အပြုအမူတွေအတွက် (2011) Cue-သွေးဆောင် striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်။ ဦးနှောက်ကို 134: 969- 978 ။
Sikora M က
Golda S က
Gołembiowska K သည်
Bystrowska B ကို
Przewlocki R ကို
ကြွက်တွေမှာ (2013) ပစ္စည်းအသစ်အဆန်း-ရှာကြံအပြုအမူတွေနှင့်နေကြပြီးအရက်သောက်ခြင်း၏တင်းမာမှု dopamine D5 receptors ဖော်ပြအာရုံခံအပေါ် metabotropic အချိုမှု receptor 1 ကထိန်းချုပ်ထားရသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 73: 263- 270 ။
(1997) တူရိယာဆိုင်ရာအေးစက်။ ခုနှစ်တွင်: တိရိစ္ဆာန်သင်ယူမှုနှင့်သိမှတ်ခံစားမှု: တစ်ခုမိတ်ဆက်စကား။ 2nd ထုတ်ဝေ။ Hove, East Sussex: စိတ်ပညာနှိပ်ပါ။
Jiang Y ကို
Zimmerman သည် RS
Darna M က
Huettl P ကို
Dwoskin LP သို့
(2011) Prefrontal cortex နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအားနည်းချက်: ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုကြားဝင်မှဘာသာပြန်စာပေ။ ဦးနှောက် Res ဗြာ 65: 124- 149 ။
Rosenthal R ကို
Rubin က DB
(1996) ဆက်စပ်ပေမယ့် nonoverlapping ဆက်စပ်နှိုင်းယှဉ်။ Psychol နည်းလမ်းများ 1: 178- 183 ။
Milius H ကို
က de Bie တစ်ဦးက
Rosenzweig P ကို
တစ်ဦး atypical (amisulpride) နဲ့ကုသမှုနှင့်တစ်ဦးဂန္ (haloperidol) antipsychotic စဉ်အတွင်း (1999) Psychomotor, သိမြင်မှု, extrapyramidal နှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းထိခိုက်စေလုပ်ငန်းဆောင်တာ။ J ကို Clin Psychopharmacol 19: 209- 221 ။
Riccardi P ကို
လီ R ကို
Dawant B ကို
Woodward N ကို
Schmidt က: D
Baldwin R ကို
Kessler R ကို
striatal နှင့် extrastriatal ဒေသများတွင် [2006F] Fallypride ၏စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ရွှေ့ပြောင်းခံရအတွက် (18) လိင်ကွဲပြားမှု: တစ်ပေလေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 163: 1639- 1641 ။
Richelson E ကို
Souder T က
(2000) လူ့ဦးနှောက် receptors မှ antipsychotic မူးယစ်ဆေး binding: အသစ်များမျိုးဆက်ဒြပ်ပေါင်းများကိုအာရုံစိုက်ပါ။ ဘဝကသိပ္ပံ 68: 29- 39 ။
Robbins T က
Everitt B ကို
activation အတွက် mesencephalic dopamine များအတွက် (2007) တစ်ဦးကအခန်းကဏ္ဍ: Berridge အပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် (2006) ။ Psychopharmacology (Berl) 191: 433- 437 ။
(2004) အာရုံခံစားမှုရှာ၏အမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝဆက်စပ်မှု၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ J ကို Res ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ 38: 256- 279 ။
ရှင် R ကို
Cao J ကို
အဆိုပါ ventral striatum သို့ (2010) ဖက်တမင်းဆေးပြားအုပ်ချုပ်ရေးကြွက်များတွင်ခြွင်းချက်မရှိအမြင်အာရုံအချက်ပြမှုများနှင့်အတူအမူအကျင့်အပြန်အလှန်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ PLoS ONE 5: e8741 ။
Morley S က
Trigwell P ကို
(1995) hedonic သေံ၏အကဲဖြတ်သည့် Snaith-Hamilton ကပျော်ရွှင်မှုစကေးများအတွက်တစ်ဦးကစကေး။ br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 167: 99- 103 ။
Spielberg CD ကို
(1970) ကအစိုးရပိုင်ရိုစိုးရိမ်စိတ်စာရင်း: ပုံစံ X တို့မှာ Palo Alto အဘို့စမ်းသပ်လက်စွဲစာအုပ်,, CA: ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းစိတျပညာနှိပ်ပါ။
Kambouropoulos N ကို
Dawe S က
(2007) ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားလုပ်ကုသမှုအစီအစဉ်များကိုသနျ့စတဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသလား မူးယစ်ဆေးအရက်ဗြာ 26: 17- 23 ။
တစ်ဦးဆက်စပ်မှု matrix ၏ဒြပ်စင်နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် (1980) စမ်းသပ်မှု။ Psychol Bull 87: 245- 251 ။
တစ်ခုတိုးချဲ့အမွှာဒီဇိုင်းနှင့်အတူရှာကြံအာရုံ၏ (2006) မျိုးဗီဇစိတ်ဖြာ။ ပြုမူနေမျိုးရိုးဗီဇ 36: 229- 237 ။
Terracciano တစ်ဦးက et al ။
မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်အသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှု (2011) တွင် Meta-analysis သည်စိတ်လှုပ်ရှားမှု-ရှာနဲ့ဆက်စပ် CTNNA2 အတွက်ဘုံမျိုးကွဲသတ်မှတ်။ ဘာသာပြန်စိတ်ရောဂါကုသမှု 1: e49 ။
ဗန် der Elst W က
ဗန် Boxtel MPJ
ဗန် Breukelen GJP
Jolles J ကို
(2006) အဆိုပါပေးစာလုံခြုံရေးဂဏန်းလူစားထိုးစမ်းသပ်ခြင်း။ J ကို Clin Exp Neuropsychol 28: 998- 1009 ။
(2001) ကငါး Factor မော်ဒယ်နှင့် Impulse: Impulse ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Individ ကွဲပြားခြားနားသော 30: 669- 689 ။
(2011) ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်များအတွက် pharmacotherapies ဖွံ့ဖြိုးဆဲထဲမှာ Impulse ၏ကြွက်မော်ဒယ်များ၏ utility ကို။ br J ကို Pharmacol 164: 1301- 1321 ။
Symmonds M က
Hodgson K သည်
(2012) ချဉ်းကပ်-ရှောင်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များရွေးချယ်မှုအပေါ်အန္တရာယ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုသက်ရောက်မှု dissociable မှကူညီသည်။ J ကို neuroscience 32: 7009- 7020 ။
Zack M က
(2007) တစ်ဦးက D2 ရန်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲ၏အကြိုးနှင့် priming သက်ရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ Neuropsychopharmacology 32: 1678- 1686 ။
Zuckerman က M
(1990) အာရုံခံစားမှုရှာ၏ psychophysiology ။ J ကို Pers 58: 313- 345 ။
(1994) အပြုအမူအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့အာရုံခံစားမှုရှာ၏ biosocial အခြေစိုက်စခန်း။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကနှိပ်ပါ။